ABMA Journal 07-02-2010
ABMA Journal Volume 1 No 7
All Burma Monks Alliance (မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု အဖြွဲ့ ကီး)
ဖေဖော်ဝါရီ (၁၂) (၁၃)နဲ့ (၁၄) ဘာကို အရေးပေးကြမလဲ
တဦးပေါ် တဦး အပြန်အလှန်
၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုပြီးနောက် ၁၉၉၀ ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန သံဃာတော်များ သပိတ်မှောက် ကံဆောင်မှု ပြုလုပ်စဉ်ကပင် သာဂါရာ အနာဂါရာစ ဥဘော
အညောည နိဿိတာ=ဆရာ+ဒကာ၊ရေ နဲ့ ကြာ ပမာ ရေမြင့်မှ ကြာတင့်သလို ပြည်သူ လူထု ဒကာ ဒကာမတွေ ကိုယ်ကျမ္မာစိတ်ချမ်းသာ ပြည့်စုံပါမှ ဆရာ
သံဃာ သာသနာ ထွန်းလင်းဖြာနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ စိရံ တိဋ္ဌတု သဒ္ဓမ္မော၊ဓမ္မေ ဟောန္တု သဂါရဝါ၊သဗ္ဗေပိ သတ္တာ ကာလေန၊သမ္မာ ဒေဝေါ ပဝဿတု။
ယထာ ရက္ခိံသု ပေါရာဏာ၊သုရာဇာနော တထေဝိမံ။ရာဇာ ရက္ခတု ဓမ္မေန၊အတ္တနောဝ ပဇံ ပဇံ=မြတ်ဘုရားသာသနာ အဓွန့်ရှည်ကြာ တည်ပါစေကြောင်း၊
ဆရာ ဒကာ၊ မင်းနဲ့ပြည်သူ၊ လူအချင်းချင်း ရိုင်းပင်းရိုသေ တရားတွေ ကျင့်နိုင်ကြစေကြောင်း ၊ ရေမြေသဘာဝ မိုးလေဝသမှန်ကန်စေကြောင်း၊ အုပ်ချုပ်သူ
အစိုရမင်းတို့သည် ရှေးမင်းကောင်း မင်းမြတ်တို့လို တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထုကို ရင်ဝယ်သားပမာ စောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေကြောင်း အဋ္ဌကထာ
ဆရာတို့၏ ဆန္ဒအတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံသားအချင်းချင်း လှည့်ပတ်ခြင်းကင်းရှင်းကာ အုပ်ချုပ်သူများတရားနည်းအတိုင်း အုပ်ချုပ်စေရန် ကြိုးစားကြရင်း
ဆရာတော် ဦးပညာဇောတ အပါအ၀င် သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုမှ ဆရာတော် သံဃာာတော်များသည် တရားမဲ့ အုပ်ချုပ်သူတို့၏ နှစ်ရှည်ဖမ်းဆီး ထောင်ချခြင်း
ခံခြဲ့ ကရ ပါသည်။
လွတ်မြောက်လာသည်နှင့် ဆက်လက် ကြိုးစားကာ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖြွဲ့ ကီးကို ဆန္ဒတူ ဆရာတော်များ ဦးဆောင်ကာဖွဲ့စည်း
ခဲ့ကြပြီး ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကြီးကို ဦးဆောင်ကာ တိုင်းပြည်ကို မတရား အုပ်ချုပ်နေသော အမျိုး ဘာသာ သာသနာကို
လက်နက်ကိုင် ထင်တိုင်းကြဲနေကြသည့် စစ်ခေါင်းဆောင်များကို သပိတ်မှောက်(ပတ္တနိ က္ကုဇ္ဇန)ကံ ဆောင်ခြဲ့ ကပြန်သည်။
မိစ္ဆာစစ်ခေါင်းဆောင်များကို အစ္စယော မံ ဘန္တေ အစ္စဂမာ ယထာဗာလံ ယထာမူဠှံ ယထာ အကုသလံ အစရှိသော မိမိတို့မိုက်မဲ တွေဝေ
ဲ သာ ပြစ်မှုများကို တောင်ပန်သည့် တရား နည်းလမ်းနှင့်အညီ တောင်းပန်မှ၊ ၎င်းတို့၏ မိစ္ဆာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို
စွန့်လွှတ်မှ ဝိနည်းတော်အတိုင်း သပိတ်လှန် ကံဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း အတိအလင်း ကြေငြာခဲ့သည်။
နအဖမိစ္ဆာတိတ္ထိ စစ်ခေါင်းဆောင်တို့သည် တရားတော်နှင့်အညီ တောင်းပန်မှုမရှိခြင်းကြောင့် ၎င်းတို့ကို သပိတ်မှောက်ထားဆဲဖြစ်သည်၊ထို့အတူ ၎င်းတို့ကို
အားပေးကူညီနေကြသူများ၊၎င်းတို့နှင့်ပူးပေါင်း၍ တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုး ဘာသာ သာသနာအတွက် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေသူများအား နည်းမျိုးစုံဖြင့်
တိုက်ခိုက်နေကြသူများကိုလည်း နအဖမိစ္ဆာတိတ္ထိ သာဝကအနေဖြင့် သပိတ်မှောက်ရမည့်အားလျှော်စွာ မကြာမီရက်ပိုင်းကပင် တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုး ဘာသာ
သာသနာအတွက် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေသော လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တိုက်ခိုက်နေ သည့် အောင်ဆန်းဦးကိုလည်း
နအဖမိစ္ဆာတိတ္ထိသာဝက အနေဖြင့် သပိတ်မှောက်ကံဆောင်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပါသည်။
မိစ္ဆာတိတ္ထိစစ်အာဏာရှင်စနစ် တည်မြဲစေရန်၎င်းတို့ကို အားပေးကူညီနေကြသော ဝိသမလောဘ စီးပွားရေးသမားများ၊ ၎င်းတို့နှင့်ပူးပေါင်း၍ တိုင်းပြည်နှင့်
လူမျိုး ဘာသာ သာသနာအတွက် ကြိုးပမ်းမှုများကို နှောက်ယှက်သူ မှန်သမျှကိုလည်း နအဖမိစ္ဆာတိတ္ထိသာဝက အနေဖြင့် သပိတ်မှောက်ရမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖြဲွ့ ကီးမှဦးဆောင်၍ သံဃာတော်တို့၏ သပိတ်မှောက်ကံ ဆောင်ခြင်းသည် ပါတီနိုင်ငံရေး အာဏာနိုင်ငံရေးနှင့်
လုံးဝ မပတ်သက်ပဲ ဝိနယေ ဌိတေ သာသနံ ဌိတံ ဝိနယောနာမ သာသနဿ အာယု=ဝိနည်းတည် မှ သာသနာ တည်နိုင်မည် ဝိနည်းသည်
သာသနာတော်၏ အသက် ဟူသည်နှင့်အညီ ဝိနည်းပိဋကတ်ပါဠိတော်လာ ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇနအင်္ဂါအရ မြန်မာပြည်သူလူထု အများဆုံးကိုးကွယ်သည့်
ဗုဒ္ဓသာသနာ မကွယ် ပျောက်စေရေး ဦးတည်ချက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုး ဘာသာ သာသနာအတွက် ကြိုးပမ်းနေကြသူအားလုံးလည်း မြန်မာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု နည်းတူ
ဆက်ဆံပေါင်းသင်းမှုမပြုပဲ သပိတ်မှောက်သင့် ပါကြောင်း တင်ပြအပ် ပါသည်။
Issue 1.. နိုင်ငံတကာကြား စားခွက်လုတဲ့ မြန်မာများရယ်လို့ ဒဲ့ မပြောရုံပဲ ကျန်တော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ န အ ဖ ပြုတ်ကျ မင်းတို့များ အစိုးရရင် တို့မြန်ပြည်ကြီး ဆယ်ဆတိုးလို့ ပိုးဆိုးဘို့ပဲ ရှိမှာပေါ့။ ALL NO ဆိုတဲ့ ပြည်သူ့အသံ မကြာခင် ညံလာရင်ဖြင့် မင်းတို့ဇာတ်လမ်း တခန်းရပ်မှာနော်။ (၃) ကြိမ် သာဓုသံ ပြည်သူ့ထံက မင်းတို့ မရပဲ မှူး သန်းရွှေရဲ့ သာဓုသံနဲ့ မျှဝေခြင်းပါ အဆစ်ရလိမ့်မယ်။ မင်းတို့ သတိထားသင့်ကြပြီ။ (မောင်ပြုပြင်) (မှတ်ချက်.... Issue 1 1 Page3သုံးကြိမ် သာဓု လင်ချစ် မယားချစ်၊ သားသမီး ချစ်ထက်၊ အခေါ်မခံထိုက်သူများ တိုင်းတပါးရောက် ပြည်ချစ် စိတ်ထား၊ တော်လှန်များတို့။ မင်းတို့တွေဟာ တို့ပြေ တို့မြေ၊ ပြည်သူတွေတွက်၊ စွန့်ခြင်း ကြီးကြီးစွန့်လို့၊ မကြာခင် တနေ့ ပြည်သူတွေ လက်ထဲ၊ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ သကြားခဲလေး၊ ရောက်ရမယ် မှန်းချက်နဲ့ လှမ်းထွက်ခဲ့ကြတုန်းက၊ မင်းတို့ ခြေလှမ်းတွေ ညီလုက်ိတာ သာဓု တကြိမ် ခေါ်မိ၏။ ဒုက္ခသည် စခန်းမှာလည်း ခါးသက်တဲ့ ဒုက္ခတွေ မျှဝေလို့ ခံစား ညီညွတ်ဆဲ ထပ်ကြားရတော့ (၂)ကြိမ် သာဓု ခေါ်မိ၏။ ညီညွတ်တဲ့ မင်းတို့တတွေ သမဂ္ဂတွေ အသီးသီးဖွဲ့၊ ဟိုတာဝန် ဒီတာဝန် .စာရိတ္တမဏ္ဍိုင် ခိုင်မာ၍ လမ်းမှန်လျှောက်ပြီး ပန်းတိုင်မပျောက်စေရေး အတွက် ရည်ရယ်ွရေးသည်) ....ဘာတာဝန် ညာတာဝန်.ဝန် ဒီဝန်တွေအတွက် နိုင်ငံတကာနဲ့ NGO တွေပါ သာဓုတွေ ဝိုင်း ခေါ်လို့ အထောက်အပံ့တွေဝေမှ တယောက်နဲ့ တယောက် တသင်းနဲ့ တသင်း မင်းတို့ အချင်းချင်း ခွက်ခြင်းတိုက်သံ ဘဝဂ်ညံခဲ့ပေါ့။ (ခုလည်းကြားနေရဆဲပ)ဲ ရှက်ကြစမ်းပါ ကိုယ့်လူတို့ရာ. ဝန်.... ဝန်. Volume Volume 1.
Page4ကာတွန်းစာမျက်နှာ ABMA ဂျာနယ်သို့ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ စာမူများ ပေးပို့လိုပါလျှင် allburmamonksalliance@gmail.com သို့ အီးမေးဖြင့် ပေးပို့ နိုင်ပါသည်။ မိမိတို့ သိရှိလိုသော သာသနာရေး ဆိုင်ရာ မေးခွန်းများကို လည်းမေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်း အသိပေး အကြောင်းကြား အပ်ပါသည်။ အယ်ဒီတာအဖွဲ့ အကြံပေး အဖွဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဓမ္မဃောသက ဦးပညာဇောတ ဦးဇနက D-Wave ဦးဇဝန မင်းသစ် ဆရာကျော် ထုတ်ဝေသူ တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ ကွန်ပြူတာ စာစီ၊စာရိုက် မြန်မာနိုင်ငံ လုံးဆိုင်ရာ ဦးနန္ဒမာလာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု အဖွဲ့ကြီး လှိုင်ရမ္မာ .r.s.com b.o2007@gmail.
Page5Volume 1.။ အပြစ်တွေ ပေကျံနေတဲ့ ကာယကံ ၊ အပြစ်တွေပေကျံ နေတဲ့ဝစီကံ ရှိသူကို လူဆိုး လူမိုက် လို့ခေါ်ကြတယ်မဟုတ်လား။ မည်းညစ်မှုအပြစ်တွေရှိလာအောင် ညစ်နွမ်း လာအောင်လိုချင် တက်မက်မှု၊ လွန်ကျူးပြစ်မှားမှု ၊မသိမိုက်မဲမှု တွေက အမည်း စိတ်တွေ ညစ်နွမ်းစိတ်နဲ့ အပြစ်တွေကို စတင်စေတဲ့အရာတွေ ပါ ။အဲ့ဒီ တပ်မက်မှု စတဲ့သုံးမျိုး ကိုလွန်ကျူးပေါက် ထွက်အောင်လုပ်ရာမှာ အပြစ်တွေ မည်းညစ် မှုတွေက ကျူးလွန်သူကိုသာ မည်းစေ ညစ်စေ တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘေးလူကိုလည်းပူလောင်စေ ညစ်စေပေစေတာပါပဲ။ ငါးပါးသီလ မလုံခြုံသူတစ်ယောက် ရပ်ကွက် ထဲရောက်လာရင် အဲ့ဒီရပ်ကွက် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ ငါ့ ကိုများရန်ရှာမလား တွေးပူရ၊ ငါ့ပစ္စည်းများ ခိုးဝှက်မလား စိုးရိမ်ရ ၊ အချောင်နှိုက်မယ့် သူလား၊ ဖိုးတွမ်တီး များလားး၊ မူးယစ်ရမ်းကားသူလား စတဲ့ အတွေးတွေက ရပ်ကွက်ထဲ အတူနေတွေကို နှိပ်စက်နေမှာ မလွဲပါဘူး။ဒါက လူဆိုး တစ်ယောက်နဲ့အတူ နေမိလု့ပိူလောင်မှု ညစ်နွမ်း မှုတွေပါပဲ။ငါးပါးသီလ မလုံခြုံသူကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင် မငြိမ်းချမ်းနိုင်တော့ပါဘူး။ များများ မလိုပါဘူး။မည်းညစ်နေ အပြစ်တွေကျူးလွန် နေတဲ့ လူဆိုး လူမိုက် တစ်ယောက်လောက် ရှိရုံနဲ့ အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ဟာ မငြိမ်းချမ်းနိုင်တော့ပါဘူး။ မြန်မာပြည်ဟာ မငြိမ်းချမ်းပါဘူး။ ငါးပါးသီလ မလုံသူတွေကြောင့်ဆိုတဲ့ ကောက်ချက်ဟာ အမှန်ကန်ဆုံး အဖြေ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အုပ်ချုပ်သူ တွေ ကိုယ်တိုင် က ငါးပါး သီလ မလုံခြုံဘူးဆိုတာ လူတိုင်းသိပြီးသားအကြောင်းအရာပါပဲ။ သာမန်လူတစ်ယောက် ငါးပါးသီလ မလုံတာ ကလေးကတောင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဒုက္ခပေးရင် တိုင်းပြည် အုပ်ချုပ်သူတွေ ငါးပါးသီလ မလုံမှုဟာ တတိုင်းပြည်လုံး မငြိမ်းချမ်းမှုကို ဘယ်လောက်အထိ ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာ ထင်ရှား မြင်သာတဲ့ ကိစ္စပါ။ ငါးပါးသီလ မလုံသူကိုလူဆိုး လူမိုက်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိကျူးလွန် သူကိုတော့ လူယုတ်မာ လို့ပြောရမှာပါ။ နိုင်ငံရေးဆိုတာကို ဘယ်လိုဖွင့်ဆိုတယ်လို့ ကျကျနနမသိပါဘူး။ ဘာသာရေးနယ်က လူတစ်ယောက် အနေနဲ့တော့ သူတော်ကောင်းတရား ထွန်းကားရေး ကို စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်ရမှာပါ။ တိုင်းပြည် ဒုက္ခရောက်နေရတဲ့ ကိစ္စကိုလည်း ဘာသာရေးအမြင်နဲ့ ကြည့်မိပါတယ်။ အဖြေကတော့ သူတော်ကောင်း တရားတွေ တိုင်းပြည်မှာ ခေါင်းပါးနေကြလို့ ဆိုတဲ့ အဖြေကို ရလိုက်တာပါပဲ။ အထူးသဖြင့် တိုင်းပြည် အုပ်ချုပ်သူတွေထံမှာ သူတော်ကောင်းတရား မရှိတာ ပါ။ ငါးပါးသီလကိုတောင်မှ သူတို့ မထိမ်းနိုင်လျှင် သူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့ ဒီတိုင်းပြည် ဘယ်လိုလုပ် ငြိမ်းချမ်းနိုင်တော့မှာလဲ။အထူးသဖြင့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ကျူးလွန်နေကြတာ ဆိုတော့ ပိုဆုိး တာပေါ့။ သူ့အသက်သတ်ခြင်း၊ တိုင်းပြည် ဘဏ္ဍာခိုးယူခြင်း၊ မီဒီယာ ပေါင်းစုံကနေ တနေ့မပြတ် မုသာဝါဒ ကျူးလွန်ခြင်း တို့ကို စီမံကိန်းချ လုပ်ဆောင် နေကြတာကို မြင်တွေ့ သိရှိ နေရပါတယ်။ ဒီကိစ္စတွေဟာ မလုပ်ကောင်းတဲ့ အမှုဖြစ်တယ်။ဒီလိုလုပ်တာကို သိသိနဲ့ လက်ပိုက်ကြည့်နေရင် ဘုရားသာသနာ ပြန့်ပွားရေးကိုလျှစ်လျှူရှုတာပါပဲ။ လူယုတ် မာတရား ပြန့်ပွားနေတာကို ရပ်တန့်အောင် မလုပ်တာသာဖြစ်တယ်။ သူတော်ကောင်းတရားထွန်းကားရေးကို မလုပ်ဘဲနဲ့ သာသနာပြုတယ်လို့ မဆိုနိုင် ပါဘူး။ လူယုတ်မာတွေထံက အမည်းအညစ်တွေကို ဆွဲခွါပစ်ရပါ မယ်။ ဒါဟာ နိုင်ငံရေး လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး ။သူတော်ကောင်း တရားထွန်းကားအောင် တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်းအောင် လုပ်တာဟာ ကုသိုလ်ရတဲ့ လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါတယ်။ လူအချင်းချင်း လှည့်ပတ်ခြင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ။ ဒို့မေတ္တာစွမ်း ကမ္ဘာလွှမ်း ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ။ ဦးဇဝန --ဒိုက်ဦး . Issue 1 Page5ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ကုသိုလ်အလုပ် အဘိဓမ္မာတရားတော်မှာ အကုသိုလ် တရားကို အမည်း(ကဏှ) ကုသိုလ်တရား ကို အဖြူ (သုက္က)လို့ ခွဲခြား ထားပါတယ်။ လူတစ်ဦးရဲ့ စိတ်ထဲမှာအဖြူ အမည်း စိတ်တွေ ရောပြွမ်းနေ ပါတယ်။ လူသားတစ်ဦးအနေနဲ့ အတွင်းသန္တာန် မှာရှိတဲ့ စိတ်ကို အဖြူ စိတ်တွေ ဖြစ်ဖို့ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေကို ဗုဒ္ဓက အတိအကျ ညွှန်ပြပြီး ဖြစ် ပါ တယ်။ နောက်ဆုံး အမည်းစိတ်တွေ အားလုံး လက်စသိမ်း သည် အထိ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဖြူစင်သော လူသား(အရိယ) အဖြစ် မ တည်ဆောက်နိုင်သေးသော သာမာန် လူတိုင်းမှာ အဖြူ အမည်းစိတ်တွေ ရောပြွမ်း နေမှာပါပဲ။ မည်းသော ညစ်နွမ်းသော စိတ်ကို ကိန်းအောင်းနေသောညစ်နွမ်းမှု၊ ထကြွ လာသော ညစ်နွမ်းမှု၊ လွန်ကျူးပေါက်ထွက်လာသော ညစ်နွမ်းမှု လို့သုံး မျိုးခွဲ ထားပါတယ်။ ဒီသုံးမျိုးလုံးကို ဖြူစင်အောင်လုပ်နည်းတွေ ရှိပါတယ်။ ပြောလို ရင်းက ဖြူစင်အောင် လုပ်နည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီသုံးမျိုးထဲက လွန်ကျူး ပေါက်ထွက်လာသော ညစ်နွမ်း မှုတွေ ပေကျံနေကြတဲ့ ကိစ္စကို ပြောလိုတာပါ။ တစ် နဲ့ နှစ် ညစ်နွမ်းမှုက လူကို သိသာသော ထူးခြားမှု မဖြစ်ပေမယ့် လွန်ကျူး ပေါက်ထွက်လာတဲ့ညစ်နွမ်းမှု ကတော့ ထူးခြားမှုတွေ ရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဥပဒေ စကားနဲ့ ပြောရ ရင် ပြစ်မှု မြောက်သွားလို့ ပါပဲ.
Page6ဖေဖော်ဝါရီ (၁၂) (၁၃)နဲ့ (၁၄) ဘာကို အရေးပေးကြမလဲ ကမ္ဘာသုံး ပြက္ခဒိန်၏ ဆယ့်နှစ်လတွင် ဒုတိယမြောက်လဖြစ်သော ဖေဖော်ဝါရီလသို့ ရောက်ပြီဆိုသည်နှင့် ကမ္ဘာ့ လူငယ်ထုအကြား အာရုံထားကြ သော နေ့သည် (၁၄)ရက်နေ့ဖြစ်သည်၊ ထိုနေ့သည် ချစ်သူများနေ့ဖြစ်၍ ချစ်တတ်သောနှလုံးသားရှိကြသည့် ကမ္ဘာ့လူငယ်ထုသည် မိမိတို့ချစ်သောသူ အတွက် အနည်းဆုံးစကားလက်ဆောင် မှစ၍ မိမိတို့တတ်နိုင်သလောက် အမှတ်တရချစ်လက်ဆောင် ပေးပို့နေကြသည်မှာ ကမ္ဘာ့ရွာ တလွှား ဖေဖော်ဝါရီ လ အတွက် အထင်ရှားဆုံးရက်တရက်ဖြစ်သလို မြန်မာလူငယ်ထုအကြားမှာလဲ ထင်ရှားတဲ့ ရက်တရက်ဖြစ်လာပေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူ ထိုသို့ဖြစ်လာသည်မှာ သိပ်မကြာသေးပါ၊ နအဖလက်ထက်တွင်မှဖြစ်သည်။ခေတ်ကာလ၏ တောင်းဆိုချက်အရ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး စသောအကြောင်းများကြောင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသာမက ကမ္ဘာ့အနောက်ခြမ်းအထိ ရောက်ရှိနေ ကြသော မြန်မာလူငယ်တို့အကြား ချစ်သူ များနေ့ ရေပန်းစားလာမှုကြောင့်က တကြောင်းနဲ့ ဂြိုလ်တုစလောင်းမှကြည့်ရှုခွင့် ရသော ဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်များကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များအကြား ပို၍ ထင်ရှားလာသည်။ အနုပညာရှင်တို့ရဲ့ ချစ်သူများနေ့အထိမ်းအမှတ် ဖျော်ဖြေရေးပွဲများကိုလည်း တ ခမ်းတနား ကျင်းပခွင့်ပြု၍ ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၄)ရက်ချစ်သူများနေ့ကို ချစ်တတ်သူလူငယ်များ စိတ်ထဲပို၍ စွဲနေစေသည်မှာ နအဖ၏ စေတနာဖြစ်ပင် သည်။ လူငယ်များက လူငယ်ဘာဝ ပျော်ရွှင်ကြမည်သာ။ မဆလခေတ်တုန်းကလည်း ဇန်နဝါရီလလယ်လောက်ကစလို့ ဖေဖော်ဝါရီလ ပထ မပတ် လောက်အထိ ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမမှာ တနှစ်တာ နားနေခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စု အလံတော်ကို မြန်မာပြည်အနှံ့ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းအလိုက် သယ်ဆောင် ပြီးတော့ ပြည်ထောင်စု အလံရောက်ရှိ ညအိပ်ရပ်နားရာ မြို့တွေမှာ ပြည်ထောင်စုနေ့ ပြ ပွဲတွေ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေ ကျင်းပလေ့ရှိကြပြီး ဖေဖေါ်ဝရီလ ၁၂ရက်နေ့မှာ မြို့တော်ရန်ကုန်ရဲ့ ကျိုက္ကဆံကွင်းမှာလည်း ကြီးကျယ် ခန်းနားစွာ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ ကျင်းပပေးခဲ့ သည်မှာလည်း ထိုခေတ်က မဆလရဲ့ စေတနာပါပဲ။ ထိုအချိန်ကလည်း လူငယ်များက လူငယ်ဘာဝ ပျော်ရွှင်ခြဲ့ ကသည်သာ။ မဆလ၊ နဝတတို့၏ စိတ်ရင်းစေတနာကား အဘယ်ပါနည်းဟု စဉ်းစား တွေးခေါ်မှု မရှိခဲ့၍ ၎င်းတို့၏စေတနာမှန်ကို နားမလည်၊ သဘောမပေါက်ခဲ့ကြပေ။ ထိုစိတ်စေတနာ၏ ရင်းမြစ်က အဘယ်ပါနည်းဟု သေသေချာချာ လေ့လာ ကြည့်သော် ထို၁၂ရက်နေ့၏ အနှစ်သာရကိုမေ့ပြီး မျိုးဆက်သစ် လူငယ်တွေ အပျော်အပါးမှာနစ်မွန်းနေစေချင်သည့် အကုသိုလ် စေတနာသာဖြစ်သည်။ တကယ်တမ်း နိုင်ငံသားတိုင်း သိသင့်သိထိုက်၊ လေ့လာထိုက်ပြီး နားလည် ထိုက်သည်မှာ တိုင်းပြည် လွတ်လပ်ရေးရရန် အရင်းခံသော အောင်ဆန်း-အက်တလီစာချုပ်ကို အောင်မြင်စေမည့် အဓိကကျသော ပင်လုံ ညီလာခံ၊ ပင်လုံ စာချုပ်၊ တောင်တန်းပြည်မ ပေါင်းစည်းကြသည့် ပြည်ထောင်တခု တည်ထောင်နိုင်မည့် တိုင်းပြည်အတွက်အရေး ကြီးလှသော စာချုပ်ချုပ်ဆို နိုင်ခဲ့ သည့် နေ့အဖြစ် သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုနေ့၏ အနှစ်သာရသာ ဖြစ်သည်။ ဗမာပြည်မနဲ့ နယ်စပ်ဒေသ တွေကို နိုင်ငံရေး အရ ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း မရှိနိုင်အောင် နယ်ချဲ့အစိုးရက အစွမ်းကုန် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ နယ်စပ်ဒေသ လူမျိုးများနဲ့ ဗမာလူမျိုးများ အကြား သွေးကွဲစေဖို့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ခြေထိုးခဲ့ကြပေမယ့် အမျှော်အမြင် ကြီးမားလှတဲ့ ရှမ်းပြည်စော်ဘွားတွေဟာ နယ်စပ်ဒေသခေါင်းဆောင်များနဲ့ ဗမာပြည်မ ခေါင်းဆောင်များ ရှမ်းပြည်တနေရာမှာ တွေ့ဆုံပြီး နှီးနှောဖလှယ်ဖို့ စီမံနိုင်ခဲ့ကြပြီး၊ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ပထမပင်လုံ ညီလာခံကြီး ကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခ့သဲည်။ ထိုပထမ ပင်လုံ ညီလာခံကို တက်ရောက်ဖို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အမှူးပြုတဲ့ ဗမာခေါင်းဆောင်များအား ဖိတ်ကြားခြင်းကို ရှမ်းပြည်က မျက်နှာဖြူ အရာရှိတွေက တားဆီးပိတ်ပင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြပါသော်လည်း အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခ့ပဲါသည်။ ပထမ ပင်လုံညီလာခံကနေ အစ ပြုပြီးတော့ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓာတ်နဲ့ သဘောတရားများ စတင် အမြစ်တွယ်ခဲ့ပါသည်။ နယ်စပ်ဒေသ ခေါင်းဆောင်များ ညီညွတ်စွာ ပေါင်းစည်းမိခဲ့ကြသည်။ ထိုမှ တဆင့် ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် ပင်လုံညီလာခံ ကျင်းပဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဖော်ဖော်ဝါရလ ၆ ရက်နေ့မှ ၁၂ ရက်နေ့ အထိ ကျင်းပတဲ့ ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက“ ပင်လုံအစည်းအဝေးကို အကြောင်းနှစ်မျိုးကြောင့် လာရကြောင်း၊ .
Volume 1. Issue 1 Page7ပထမမှာ မြန်မာပြည်ရှိလူမျိုးများ၏ ညီညွတ်ရေး အတွက် ဖြစ်၍၊ အခြားအကြောင်းမှာ လန်ဒန် ဆွေးနွေးပွဲ၌ တောင်တန်းဒေသနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ခ့သဲည် ကို ပြောဆို ရှင်းလင်းပြရန်ဖြစ်ကြောင်း။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးအရ မြန်မာပြည်ရှိ လူမျိုးအားလုံးမှာ ညီညွတ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊တနည်းအားဖြင့် ဆိုလျှင် မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးမှာ ရပြီဟု ဆိုနိုင်ကြောင်း၊ ယခုကျန်ရှိ နေသော ပြဿနာ မှာ တောင်တန်းဒေသ ကိစ္စပင် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘိလပ်ဆွေးနွေးပွဲ၌ မြန်မာပြည် ကိုယ်စား လှယ်များက တောင်တန်းနယ် လွတ်လပ်ရေးကို တချိန်တည်းမပေးခဲ့လျှင် တကယ့်လွတ်လပ်ရေး မဖြစ်နိုင်ဟု ပြောဆိုခ့ေဲကြာင်း၊ တောင်တန်း နယ်ကို ဗြိတိသျှတို့ တိုက်ရိုက် အုပ်ချုပ်ခြင်း ကို မြန်မာလူမျိုးတို့က မကြိုက်ကြောင်း၊ တောင်တန်းနယ်ကို တောင်တန်းလူမျိုးများသာ အုပ်ချုပ် စိုးမိုးခြင်း ကို မြန်မာများက ကြိုက်ကြောင်း။ ဗြိတိသျှတို့က တောင်တန်းနယ် လူမျိုးများ သည် အောက်ကျနောက်ကျ ဖြစ်နေသေးသဖြင့် လွတ်လပ်ရေးနှင့်မတန်ဟု ထင်နေကြကြောင်း၊ ထိုသို့တင်ပြချက်ကို မြန်မာများက သဘောမတူကြောင်း၊ မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေး ရသည်နှင့် တပြိုင်နက် တောင်တန်းနယ် လွတ် လပ်ရေး ရရမည်ဟု မြန်မာများက ထင်မြင်ကြောင်း၊ မြန်မာများ သည် တောင်တန်းဒေသများအတွက် ပြောဆိုခြင်းမှာ အုပ်ချုပ်စိုးမိုးလို၍ မဟုတ်၊ သို့ရာ တွင် တောင်တန်းနယ်များသည် မြန်မာပြည်နှင့်တန်းတူ အဆင့် အတန်း အခွင့်အရေး ရစေလိုသောကြောင့်ပင်ဖြစ်ကြောင်း။ မြန်မာများသည် ဗြိတိသျှ၏ ကျွန်မဖြစ်လိုကြောင်း၊ ထိုနည်းတူ တောင်တန်းလူမျိုးများလည်း ဗြိတိသျှ ကျွန်များအဖြစ် မရောက်စေလိုကြောင်း၊ ထို့ပြင် တောင်တန်းလူမျိုးများ သည် မြန်မာ့ကျွန်အဖြစ် မဖြစ်စေလိုကြောင်း။ တောင်တန်းနယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးမှာ ကောင်စီ၏လက်ထဲ၌ ရှိလိမ့် မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုကောင်စီအဖွဲ့ထဲ၌ တောင်တန်းနယ်မှ ကိုယ်စားလှယ်တယောက် ရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ရာ ၎င်း၏လက်ထဲမှာကား ထို အုပ်ချုပ်ရေး ရှိ မည် ဖြစ်ကြောင်း။ ဗြိတိသျှတို့မှာ မြန်မာပြည်၌ ကြာရှည်စွာ အုပ်စိုးရန် အခွင့်အခါမရှိတော့ကြောင်း၊ စောစော သို့မဟုတ် အနည်းငယ်ကြာလျှင် မြန်မာပြည်ကို စွန့်လွှတ်ရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အားကိုးအားထား ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ထိုနေရာ၌ ညီညွတ်ရေးမှာ လွန်စွာပင်လိုကြောင်း။လွတ်လပ်ရေးရပြီးသောအခါမှပင် အဆင့်အတန်းမြင့်နိုင်ကြောင်း၊ လွတ်လပ်ရေး မရလျှင် လက်ရှိ အောက်ကျ နောက် ကျ ဖြစ်နေ သော အဆင့်အတန်းကို မြှင့်တင်နိုင်ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ လူဖြူဖြစ်စေ လူမြဲ ဖစ်စေ မည်သူ့ကိုမဆို မကြောက်မရွံ့နှင့် ၎င်းတို့က တောင်တန်းလူမျိုးများကိုမေးခဲ့လျှင် တောင်တန်းလူမျိုးများက လွတ်လပ်ရေးကို လိုချင်တယ်ဟု ပြောရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ခြောက်လျှင်လည်း မကြောက်ကြနှင့် ချော့လျှင်လည်း မပျော့ကြနှင့်၊တောင်တန်းလူမျိုးများသည် မြန်မာပြည်က့သဲို့ တူညီသော အဆင့်အတန်းကို လိုချင်သည်ဟု ပြောရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ဒါကို ယနေ့ ပြောလိုက်ရင် နက်ဖြန် အဆွေတို့ လွတ်လပ်ရေး ရမည်ဖြစ်ကြောင်း” မိန့်ခွန်း ပြောလိုက်တော့ နယ်စပ်ဒေသ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ အနာဂတ် ပြည်ထောင်စု ဖွ့စဲည်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်သို့ တက်ရောက်ဖို့ တညီတညွှတ်တည်း သဘောတူခဲ့ကြကာ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့မှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အမှူးပြုတဲ့ ဗမာခေါင်းဆောင်များနဲ့ နယ်စပ်ဒေသ ကိုယ်စားလှယ်များ သမိုင်းဝင် “ပင်လုံစာချုပ်”သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းသားညီအကိုများ ထူထောင်ထား တဲ့ ပြည်နယ်တွေပေါင်းစုနိုင်တ့“ဲ ပြည်ထောင်စုစာချုပ်” ကို ချုပ်ဆိုနိုင်ခြဲ့ ကပုံ စသည့် အချက်များကိုမူ မည်သည့်အခါမှ မဖေါ်ပြပဲ မှေးမှိန် ဖျေက်ဖျက်ထား ခဲ့ကြသည်။ ထို့အတူ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး၏ ဖခင်ဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မွေးနေ့ဖြစ်သော ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့ကိုလဲ မသိ ကျိုးကျင် ပြုထားခဲ့ကြသည်။ ထိုပင်လုံ စိတ်ဓာတ်-ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ တကွ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဟာ ကိုလိုနီနိုင်ငံဘ၀ကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ ကြိုးပမ်းရာမှာ တဦးပေါ် တဦး အပြန်အလှန် ယုံကြည်လေးစားမှုတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး အဖြေရှာတဲ့ နည်းလမ်းကို ကျင့်သုံးပြီး ထူထောင် နိုင်ခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်၏ အနှစ်သာရကို ဖျောက်ပစ်ဖို့ ပြည်ထောင်စုဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ မွေးနေ့တို့ကိုဖျောက်ပစ်လိုတဲ့ စိတ်ဆန္ဒနဲ့ “ပြည်ထောင်စုရဲ့ ကျေးဇူးရှင် ဗိုလ်ချုပ်တို့ဖခင် ကောင်းစေချင်သည့် မှာစကား ပြည်သူမေ့စေသား”ဟူသော ယုတ်မာလှ သည့် စေတနာနှင့် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၂)(၁၃)ကို မှေးမှိန်စေသည့် နိုင်ငံရပ်ခြားမှလာသော ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁၄)ရက်ချစ်သူများနေ့ အထိမ်း အမှတ် ဖျော်ဖြေရေးပွဲများကို တခမ်းတနား ကျင်းပ ခွင့်ပြုနေခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။ ကိုစံ .
Page 8 ဦးသြဘာသ ဒီ(၂၀၁၀)ခုနှစ်ဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ကံကြမ္မာ၊ မြန်မာ နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ကံကြမ္မာ ကို ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တဲ့ နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း မမှားပါဘူး။ အာဏာရှင်စစ်ဘီလူး၊ မိစ္ဆာကောင်တွေရဲ့ မတရား ညှင်းပန်းနှစ်စက်၊ ဖမ်းဆီး သတ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့် မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်းမှာရှိခဲ့တဲ့ ပြည်သူတွေဟာ အကြောက် တရားတွေ လွှမ်းမိုးပြီးတော့ အမှန်တရားတွေ ပျောက်ကွယ်ခဲ့ရတဲ့အတွက် မြန်မာပြည်ရဲ့ အလှည့် အပြောင်းဖြစ်တဲ့ ဒီ(၂၀၁၀) ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်တော့မယ့် အချိန်ခါမှာ စစ်အာဏာ ရှင် စနစ်ဆိုးရဲ့ လက်အောက်မှာ နေကြရတဲ့ ဦးဇင်းတို့ရဲ့ တကာ၊ တကာမ တွေ ပြည်သူအပေါင်းကို ဦးဇင်းတို့က အမှားနဲ့အမှန်၊ အမှန်နဲ့အမှားကို ကွဲကွဲပြားပြား သိရှိပြီးတော့ ဘယ်အစိုးရဟာဖြင့် ကိုးကွယ်ထိုက်တယ်၊ ဘယ်အစိုးဟာဖြင့် မကိုးကွယ် ထိုက်ဘူး ဆိုတာတွေကို သိအောင် ပြည်သူတွေ ဒို့တကာ၊ တကာမတွေကို သိအောင် ဦးဇင်းရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို ဒီနေရာမှာ တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး စတဲ့ အထွေထွေအကြပ်အတည်း ဒုက္ခတွေဟာ (၁၉၆၂) ခုနှစ် အာဏာသိမ်း ခေါင်းဆောင် အာဏာရှင် ဦးနေဝင်းအစိုးရရဲ့ အဆိပ်ရည်ကိုလောင်းပြီးတော့ စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ မဆလပါတီ ကသီးပွင့်လာတဲ့ အသီးအပွင့်တွေကို ဒီနေ့မြန်မာပြည်သူ၊ပြည်သားတွေစားသုံးပြီး အဆိပ်မိနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနေဝင်းအစိုးရဟာ စပြီးတော့ တက်လာကတည်းက ဓါးမိုးပြီးတော့ ပြည်သူတွေ နာလံ မထူနိုင်အောင် နည်းမျိုးစုံန့ယဲုတ်မာကောက်ကျစ်စွာ ဖိနှိပ်မှုဗျူဟာတွေကိုချမှတ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီ ဗျူဟာတွေကိုလည်း သူတို့ရဲ့လက်ပါးစေ စစ်တပ်တွေကို သင်ခန်းစာအဖြစ်နဲ့ သင်ကြား ပို့ချခဲ့ တယ်။ အဲဒီစစ်တပ်ရဲ့ သင်တန်းတစ်ခုမှာ ဦးဇင်းတွေ့ခဲ့ဘူးတာက အယောင်ဆောင်ခြင်းနှင့် ရှာဖွေခြင်းဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာတစ်ခုမှာ ဘုန်းကြီးတွေ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကို အယောင်ဆောင်သူတွေ အဖြစ်နဲ့ စစ်တပ်ကို သူတို့မီးမောင်းထိုးပြပြီးတော့ သင်ကြားနေတာ တွေ့ခဲ့ရဘူးတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ဦးနေဝင်းအစိုးရဟာ သူတို့မြန်မာပြည်သူ၊ပြည်သားတွေကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း အုပ်ချုပ် နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ ဖိနှိပ်မှုကြီး (၄) ရပ်ကို သူတို့ ချမှတ်ခ့တဲယ်။ အဲဒီ ဖိနှိပ်မှုကြီး (၄) ရပ်ကတော့- ဘာသာရေး ဖိနှိပ်မှု၊ နိုင်ငံရေး ဖိနှိပ်မှု၊ စီးပွားရေး ဖိနှိပ်မှု၊ ပညာရေး ဖိနှိပ်မှု တို့ဖြစ်တယ်။ အဲဒီအချက်ကြီး(၄) ချက်ထဲမှာ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ဘာသာရေးဖိနှိုပ်မှုကို ဦးဇင်း အရင် တင်ပြပါ့မယ်။ ကမ္ဘာမှာ ဘယ်နိုင်ငံ၊ ဘယ်လူမျိုးမဆို ဘာသာရေးက အရေးအကြီးဆုံးပါ။ ဘာသာမရှိရင် ဘာသာက ဆုံးမထားတဲ့ စစ်မှန်တဲ့တရားတော်တွေ၊့်ဲ ကိုယ်ချင်းစာနာမှုတွေ၊ မေတ္တာတရားတွေကို မရနိုင်ပါဘူး။ ယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ အမှားအမှန်ခွဲခြားနိုငတ ဒါ့ကြောင့် ယနေ့ကမ္ဘာကို ဘာသာတရား အဆုံးအမတွေနှင့် ညီမျှတဲ့ ဥပဒေတွေက သတ်မှတ်ပြီးတော့ ထိန်းချုပ်ထားတာမဟုတ်လား။ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာလဲ ဘာသာရေး အဆုံးအမတွေ မေတ္တာတရားတွေနဲ့ ထ်ိမ်းချုပ်ထားတာပါ။ အဲဒါမှ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရမှာ ပေါ့။ ဒါ့ကြောင့် ဘာသာရေးဟာ အရေးအကြီးဆုံးပါ။ ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံမှာတော့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ သံဃာတော်တွေ၊ သံဃာ့ခေါင်းဆောင်တွေ၊ မူဆလင်ဘာသာဝင်တွေ၊ ခရိယာန်ဘာသာဝင်တွေ အပါအဝင် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊ ကို မသင့်မတင့်အောင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ရန်တိုက်ပေးခဲ့တယ်။ သံဃာတွေကြားမှာ သွေးထိုးခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့် တာမွေဗလီ အရေးအခင်း၊ (၈၃)ခုနှစ်မှာ မြန်မာနှင့်မဆူလင်အရေးအခင်း၊ (၈၅) ခုနှစ်မှာ လှိုင်းဘွဲမြို့ မူဆလင်နှင့် ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းမှာ ဗုံးခွဲတယ်ဆိုပြီးတော့ ရန်တိုက် ပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီဗုံးကို ထောင်တာအမှန်တကယ် စစ်တပ်ကထောင်တာပါ။ (၇၁) ခုနှစ် လောက်ကလည်း တရုတ်-မြန်မာ အရေးအခင်းဖြစ်အောင် စစ်တပ်ကပဲလုပ်ခ့တဲာပါ။ အဲဒီလိုယုတ်မာတဲ့ နည်းလမ်းတွေ သုံးပြီးတော့ ဘာသာအချင်းချင်း မတည့်အောင်လုပ် ပြီး ခေါင်းဆောင်တွေကို ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်၊ ထောင်ချခဲ့တယ်၊ သတ်ဖြတ်ခ့ပဲါတယ်။ ပြီးတော့ သံဃာ့မဟာနာယက ဆိုတ့အဲဖြွဲ့ ကီးကို ဖြွဲ့ ပီးတော့ သာသနာတော်ကို စောင့်ရှောက် သယောင်ယောင်နဲ့ သံဃာတွေကို ချုပ်ကိုင်နိုင်အောင် မလျော် ကံတဲ့ ဥပဒေတွေ၊ ဘုရားတောင် မပြစ်ညတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ ဥပဒေတွေနဲ့ အကြပ်ကိုင်ခိုင်းခဲ့တယ်။ .
Issue 1 Page9ဒီထက်ပိုဆိုးတာက ဗုဒ္ဓဘာသာ သံဃာအချင်းချင်း မညီညွတ်အောင် သံဃာသင်းခွဲတဲ့ ကိစ္စပါပဲ။ အင်မတန်ရိုးသားတဲ့ သီလ သမာဓိ သိက္ခာ နှင့် ပြည့်စုံတဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေကို ကြည်ညို သယောင်ယောင်နဲ့ လှူဖွယ်ပစ္စည်းတွေ၊ ဘွ့ထဲူး၊ ဂုဏ်ထူး၊တွေ အဲဒီလို မက် လုံးတွေ ပေးပြီးတော့ မြူဆွယ်ခဲ့တယ်။ ရာထူးတွေ၊ လစာတွေနှင့် ချုပ်ကိုင်ခ့တဲယ်။ သူတို့ခိုင်းတာတွေကို မလုပ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကို အရှက်ကွဲအောင်၊ သိက္ခာကျအောင် ယုတ်မာတဲ့ နည်းတွေနှင့် ထောင်ချောက်ဆင်ပြီးတော့ ဖမ်းဆီးပြီး အကြပ်ကိုင်တယ်။ အဲဒီနည်းတွေ ကတော့ ဆရာတော်ကြီးတွေ ခရီးသွားရင် ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ ကားထဲမှာ ဥပဒေနှင့်မကိုက်ညီတဲ့ ဘိန်းဖြူတို့လို၊ ကျောက်စိမ်းတို့လို ထည့်ထားပေး ပြီးတော့ ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်။ ဆရာတော်ကြီးတွေဆီ မကောင်းတဲ့မိန်းမတွေ လွှတ်ပြီးတော့ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ကြ တယ်။ အဲဒီလိုမကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေကို သိက္ခာချတယ်။ အကြပ် ကိုင်ကြတယ်။ အခုတော့ သူတို့မွေးထုတ်ထားတဲ့ ထောက်လှန်းရေးဘုန်းကြီးတွေ၊ွုန်း ကြီးတွေ၊ ကြံ့ဖံ့ဘ စွမ်းအားရှင် ဘုန်းကြီးတွေကို သံဃာငယ်တွေ ကြား မှာ ထောက်လှမ်းရေး လွှတ်ထားကြတယ်။ အဲဒီ ဘုန်းကြီးတွေက သံဃာဂိုဏ်းအချင်းချင်းကို မညီညွတ်အောင် ကွဲအောင် လုပ်ကြတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ မြို့ပေါ်သံဃာတွေကို ဖိနှိပ်သလိုပဲ တောထဲမှာနေတဲ့ သံဃာတွေကိုလဲ အလွတ်မပေးဘူး။ စစ်တပ်ရဲ့စစ်ဆင်ရေးနယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ သံဃာတော်တွေ ၊ အချို့ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်၊ အသက်ပါ အသတ်ခံရတယ်။ အတွေ့အကြုံ တစ်ခုကို ပြောရရင်- ကရင်ပြည်နယ်၊ သထုံခရိုင်၊ ဘီးလင်းမြို့နယ်၊ ထီးဝါစူးရွာကလေးမှာ သီတင်းသုံးနေတဲ့ သက်တော် (၅၀)၊ ဝါတော် (၃၀) ရှိတဲ့ ဆရာတော် ဦးဝါယမ ရဲ့အကြောင်းကို ရင်နင့်စရာ အဖြစ်ကလေး အဖြစ် တင်ပြချင်ပါတယ်။ လွန်ခ့တဲ့ (၁၉၇၉) ခုနှစ်လောက်က တပ်မ(၄၄)စစ်ကြောင်း၊ တပ်ခွဲမှူး ဗိုလ်ကြီး စန်းဌေးနှင့် တပ်စုမှူး ဗိုလ်ကြီးရဲအောင်တို့ ဦးဆောင်တဲ့တပ်ခွဲဟာ ဆရာတော်ကြီးသီတင်းသုံးနေတဲ့ ထီးဝါစူးရွာကလေးကိုရောက်လာပြီးတော့ တစ်ပတ်ကြာ တပ်စွဲခ့တဲယ်။ တပ်ခွဲရုံးကတော့ ဆရာတော်ကြီးကျောင်းဝိုင်းထဲမှာနေတယ်။ ဆရာတော်ကြီးဟာ သူ့ရှိတဲ့ အစားအစာတွေကို ကျွေးရှာပါတယ်။ ရဲဘော်တွေကလည်း ဆရာတော်ကြီးကိုခင်ကြတယ်၊ ရဲဘော်တွေနှင့် ဆရာတော်ကြီးဟာ အဆင်ပြေပေမဲ့လို့ တပ်ခွဲမှူးနှင့်တပ်စုမှူးကတော့ ဆရာတော်ကြီး အပေါ်မှာ ဆက်ဆံတာ အင်မတန်မောက်မာရိုင်းစိုင်းပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီးကို သူတို့ခေါ်တာက ဟိုကတုံး-ဟိုကတုံး လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာတော်ကြီးက သူတို့ကို ဘာမှ ပြန်မပြောဘူး၊ သည်းခံပြီးတော့ နေရှာတယ်။ ဘုရားခန်းမှာ ဖိနပ်မချွတ်ပဲနဲ့ တက်လာပြီးတော့ အရက်သောက်ကြတယ်။ ဒါကိုလည်း ဆရာတော်ကြီးက ဘာမှမပြောရှာဘူး။ တစ်ရက်မှာတော့... Volume 1.... ဆရာတော်ကြီး ကျောင်းဝိုင်းထဲမှာ ကရင်ရိုးရာ အလှူပွဲတစ်ခု၊ နိဗ္ဗာန်ဈေးလေး တစ်ခု ကျင်းပပြီးတော့ တကာ၊တကာမတွေဟာ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအဖြစ်နဲ့ သူတို့ရိုးရာပွဲကို ကျင်းပ ကြတယ်။ အဲဒီရိုးရာပွဲကို ရဲဘော်တွေလည်း ပျော်ပျော်ပါးပါးနှင့် တက်ရောက်ကြတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ရွာထဲက အသက်က(၁၅)နှစ် လောက်ပဲရှိတဲ့ မချစ်စု ဆိုတဲ့ မိန်းခလေး တစ်ယောက်ကို ဗိုလ်ကြီးစန်းဌေးက ခေါ်ခိုင်းပြီးတော့ ဗိုလ်ရဲအောင်နှင့်အတူ မူးမူးနဲ့ ဆရာတော် ကျောင်းပေါ်က ဘုရားခန်းရှေ့မှာ ကောင်မလေးကို မတော်မတရား ပြုကျင့်ဖို့ ကြံကြတယ်။ ခလေးမလေးဟာ အလွန်ကြောက်နေတယ်။ ကိုယ်ပေါ်မှာ အဝတ်အစားတွေ ကလည်း မရှိတော့ဘူး။ အဲဒီခလေးမရဲ့ခေါင်းကို ဗိုလ်ရေဲအာင်ကသေနတ်နဲ့ ထောက်ထားတယ်၊ ခလေးမလေးဟာ ဘဝပျက်ရတော့မဲ့ အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်၊ အဲဒီအချိန်မှာ ဆရာတော်ကြီးဟာ ကြည့်မနေနိုင်တော့ပဲနဲ့ ထွက်လာပြီးတော့ သူတို့ကို တောင်းပန်တယ်၊ ဆရာတော်ကြီးက သူတို့ကို မေတ္တာရပ်ခံတယ်၊ အဲဒီလိုပြောလို့ ဆရာတော်ကြီးကို စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ဝိုင်းပြီးတော့ ထိုးကြ၊ ကြိတ်ကြတယ်။ လုံးထွေး နေတုန်း ခလေးမလေးဟာ ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်။ အဲဒီလို ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်သွားတဲ့အတွက် ဗိုလ်စန်းဌေးတို့ဟာ ဆရာတော်ကြီးကို ငြိုးပြီးတော့ ဆရာတော်ကြီးကို ကြိုးနှင့်တုတ်ပြီး မျက်နှာကို ခြေထောက်နှင့် ကန်တယ်၊ လည်ပင်းကိုလည်း တက်နင်းတယ်။ လက်ပြန်ကြိုးတုတ်ပြီးတော့ သူတို့စိတ်ကြိုက် နှိပ်စက်ကြတယ်။ ဆရာတော်ကြီးကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ နှိပ်စက်လို့ အားမရပဲ (၂)ရက်ကြာတဲ့အခါ ရွာပြင်ကို ခေါ်ထုတ် သွားပြီးတော့ သတ်လိုက်ကြတယ်။ သတ်လိုက်ပြီးတော့ ဆရာတော်ကြီးဟာ ရန်သူ့အမာခံ ဆိုပြီးတော့ သတင်းထုတ်လွှင့်ကြတယ်။ ဒီလို အဖြစ်အပျက်တွေဟာ မြန်မာပြည်အရပ်ရပ်မှာ အများကြီးရှိပါသေးတယ်၊ ဒါတွေပြောမယ် ဆိုလို့ရှိရင် ကုန်နိုင်စရာမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် စစ်အစိုးရ ဟာ ပြည်သူ၊ ပြည်သားတွေအတွက် တကယ့်ကို အန္တရာယ်ကြီးပါပဲ၊ စစ်အစိုးရ သက်ဆိုးရှည်နေသရွေ့ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သား တွေဟာ ဆင်းရဲစုတ်ပြတ် မွဲတေပြီးတော့ အငတ်ဘေးကိုရောက်နေကြမှာပဲ။ အဲဒါကြောင့် အမှန်ကိုမြင်ပြီး စစ်အစိုးရသက်ဆိုးရှညမ်ည့် ဟောဒီ ရွေးကောက်ပွဲကို တညီတညွတ်တည်း ဆန့်ကျင်တွန်းလှန်ကြပါလို့ ဆရာတော်ကပြောချင်ပါတယ်။ တကာ၊တကာမအပေါင်း သူတော်ကောင်းတွေအားလုံး ကျန်းမာကြပါစေ၊ ချမ်းသာကြပါစေ။ ဦးဩဘာသ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာရဟန်းတော်များအဖွဲ့၊ ထိုင်းနိုင်ငံ။ .
Page 10 ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကြီးနှင့် သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု သမိုင်း မေဓာဝီ (ABMA) လောကမှာ ကိုယ်ရဲ့အယူဝါဒ အဖွဲ့အစည်း ဂိုဏ်းဂဏ လမ်းစဉ်များအပေါ် စွဲလမ်းမှု ခုံမင်မှုဆိုတဲ့ အတ္တ (သက္ကာယ)ဒိဋ္ဌိ ဆိုတာဟာ ပုထုဇဉ်လူသားတိုင်း မကင်းနိုင်ကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါ တွေအပေါ်မှာ ပြင်းပြင်း ထန် ထန်ကြီး မစွဲကိုင်မိဖို့ပဲ လိုအပ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ကိုယ်စွဲကိုင် ထားတဲ့ လမ်းစဉ် ဝါဒ လုပ်ဆောင်ချက် တခုခု လမ်းလွဲနေတယ်။ မှားနေတယ်။ သဘာဝ တရားနဲ့ မကိုက်ညီဘူး၊ လက်ရှိ တွေ့ကြုံ ခံစား နေရတာတွေနဲ့ လိုက် လျောညီထွေ မဖြစ်ဘူး ဆိုရင် အဲဒီလမ်းစဉ်ကို စွန့်ရဲရမယ်။ ပြင်ရဲရ မယ် လို့ ဆိုလိုတာပါ။ ဒါမှ သူရဲကောင်းပီသမှာ ဖြစ်လို့ပါပဲ။ ကိုယ်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ လမ်းပေါ်ကိုလဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ရဲရဲလျှောက်လှမ်းရဲဖို့လဲ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ် ကိုယ်တိုင် လမ်းဖောက်ထားပြီး သူများလမ်းပေါ်ကို ချည်းပဲ လျှောက်နေမယ်ဆို ရင်လဲ သဘာဝမကျသလို ဘောင် ကျော်လွန်ရာလဲ ရောက်ပြီး တဖက်သားကို နှောက်ယှက်ရာပါ ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ စာရေးသူ အနေနဲ့ကတော့ ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းပေါ်မှာလဲ ပြင်းထန်တဲ့ စွဲလန်းမှု မထားသလို ကိုယ့် လမ်းစဉ်သာ အမှန် ချည်းပဲလို့ ဆုတ်ကိုင်ပြီး ထားလိုတဲ့ အယူစိတ်ထား မရှိပါဘူး။ ပိုကောင်းတဲ့ နည်းလမ်းဆိုရင် လိုက်လျှောက် ဖို့ ဝန်မလေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ရွေးချယ် ထားတဲ့ လမ်းကိုတော့ မှန်မှန်ပဲ လျှောက်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ ဘယ်လမ်းပဲဖြစ်ဖြစ် တူညီတဲ့ ပန်းတိုင်ကို ရောက်ဖို့က အဓိကပါ။ ၂၀၀၇ -ခုနှစ်၊ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးကြီး ဖြစ်ပေါ်လာပြီး နောက်ပိုင်း အောင်မြင်သွားသည့် အခါမှာ ဒီ တော်လှန်ရေးကြီး ဖြစ်ပေါ် လာအောင် ဘယ်သူက လုပ်လိုက်တာ၊ဘယ်ဝါက စတင်လုပ် လိုက်တာ စသည်ဖြင့် သူရဲကောင်းတွေ အလျှိုလျှို ပေါ်လာပြီး နာမည်ကောင်း လိုချင် သူတွေ ပေါလာလိုက်ကြတာ များစွာ ကြားရ သိရ သောအခါ တကယ်လိုများ နအဖ ကသာ လိုချင်လို့ စာရင်း ကောက် မည်ဆိုပါက ထိုကဲ့သို့ ထွက်လာမည့်သူများ ရှိပါ့မလားလို့ တွေးမိပါသည်။ တကယ်တော့ ဘယ်သူတွေ လုပ်တယ်ဆိုတာကို ပြောနေကြတဲ့ သူတွေထက် နအဖက ပိုမို၍ သိရှိပါလိမ့်မည်။ သိလို့လဲ အမှန်တကယ် လုပ်ခ့တဲ့ သံဃာတွေရဲ့ ကျောင်းတိုက်တွေကို ဝင်စီးတာ ချိတ်ပိတ်တာ ပစ္စည်းခိုးယူတာ တွေကို လုပ်ခြဲ့ ပီးပါပြီ။ အကြောင်းရင်း ဖြစ်တဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေးအတွက် တောင်းဆို လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ သံဃာ တွေ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ လူထုခေါင်းဆောင်တွေကိုလဲ ဖမ်းဆီး နှိပ်စက် ထောင်ချတာမျိုးတွေကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ရှောင်တိမ်းနေသူတွေလဲ ရှောင်နေကြရဆဲပါ။ ထိုက့သဲို့ အရေးယူခံခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းတိုက်တွေ သံဃာတွေရဲ့စာရင်းများကိုလဲ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ ကြီးတွင် မှတ်တမ်းတင် ထိမ်းသိမ်းထားလျှက်ရှိပါသည်။ နအဖရဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွေမှာလဲ သံဃာ့ခေါင်းဆောင်များကို ထောင်ထွက်ရဟန်းတွေ၊ အတုတွေ၊ ဘာလုပ်ခ့တဲာတွေ စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး စွပ်စွဲပြီး ထောင်ချသူချ၊ တိမ်းရှောင်နေတဲ့ သံဃာများကိုလဲ ဝရမ်းပြေး အဖြစ်နဲ့ သတ်မှတ်ကာ လိုက်လံ ရှာဖွေ ဖမ်းဆီးနေတဲ့ လုပ်ရပ်တွေက ဘယ်သူတွေ ဦးဆောင် လုပ်ခဲ့တယ်ဆို တာ ထင်ရှားတဲ့ သက်သေများပင် ဖြစ်ပါသည်။ .
. ပါတီဖြွဲ့ ပီး အာဏာရယူဖို့ လုပ် ဆောင်တာကို နိုင်ငံရေး လုပ်တယ်လို့ ခေါ်မလား? အာဏာ မရ ယူပဲ နိုင်ငံမှာ အကြံပေးတို့လို ဆရာကြီးလုပ်ချင်လို့ လုပ်တာမျိုးကို နိုင်ငံရေး လုပ်တယ်လို့ ခေါ်မလား? နိုင်ငံရေး လုပ်တ့သဲူကို အားပေးတာလဲ နိုင်ငံရေး လုပ်တာပဲလား ? ပါတီအဖွဲ့ အစည်း ဖွဲ့ပြီး တိုက်ခိုက် ငြင်းခုံနေကြတာ ဟာလဲ နိုင်ငံရေး လား? စသည်ဖြင့် ဘယ်လိုမျိုး လုပ်တာကို နိုင်ငံရေး လုပ်တယ်လို့ ခေါ်ဆို ကြပါသလဲ မေးစရာ တွေ ရှိလာပါတယ်။ .နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် ဆက်ဆံရင်၊ ဟောပြောရင် နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်လို့ပဲ မြန်မာပြည်သား အများစုက ထင်နေကြလို့ပါပဲ။ ရိုးသားစွာ ပြောရရင် နိုင်ငံရေးဆိုတာကို သံဃာအများစုက သေသေချာချာ နားမလည်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေး ဆိုတာ ဘာလဲ . Volume 1.ရွှေဝါရောင် သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုကြီးတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော ဦးဆောင် သံဃာများမှာ ၎င်းအချိန်ကျမှ စပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ သံဃာများ မဟုတ်ကြပါ။ ကြီးကြီး ကျယ် ကျယ် ပြောရ မည်ဆိုပါက သမိုင်းအစဉ်အလာနဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ သံဃာ တော်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် ဟို လွပ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲတုန်းကထဲက ဆရာတော် ဦးဝိစာရနဲ့ ဦးဥတ္တမတို့ရဲ့ တိုင်းပြည် လွတ် လပ်ရေး အတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် သမဂ္ဂများ ဖွဲ့စည်းကြလို့ မိန့်ပြီးတဲ့ နောက်မှာ ပေါ်ပေါက်လာ ခဲ့တဲ့ ရဟန်းပျို သမဂ္ဂ သံဃသာမဂ္ဂီ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ စတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းများ၏ မျိုးဆက်များ ဆိုလျှင်လဲ မှားမည် မဟုတ်ပေ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရွှေဝါရောင် လှုပ်ရှားမှုများကို ဦးဆောင်ခြဲ့ ကတဲ့ သံဃာ (၆)ပါး အနက်မှ ဦးပညာဇောတ၊ ဦးဣန္ဒက၊ ဦးမေဓာဝီ၊ ဦးခေမိန္ဒ၊ ဦးသြဘာသ ဆရာတော် များဟာ ဆိုရင် ရှေးတုန်းက လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ ရဟန်းပျို သက်ကြီး ဆရာတော်များနှင့် လက်ပနွ်းတတီး နေထိုင်ပြီး အတူတကွ ဆွေးနွေး ခြင်းများ၊ ညှိနှိုင်းခြင်း၊ လုပ်ဆောင် ခြင်းတွေ ရှိခဲ့ကြသလို (၈၈) အရေး အခင်း မဖြစ်ခင်ကာလ ၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ ၁၅ိ/ ၂၅ိ/ ၄၅ိ/၇၅ိ/ ကျပ်တန်၊ ငွေ စက္ကူများ သိမ်းဆည်း လို့ စားဝတ် နေရေး အကြပ်အတည်း ကြုံတွေ့ချိန် ကထဲက ပြည်သူများ၏ ရှေ့မှ ရပ်တည်၍ ပြည်သူတွေ အတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြ သူများဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီအချိန် မန္တလေးမှာ ဆန်တပြည် (၃၅ိ) ထိ ဖြစ်လာတဲ့အတွက် ဆွမ်း အခက်အခဲ ဖြစ်လာလို့ ဝါတွင်း ကာလထဲမှာပဲ နေရပ်ကို ပြန် ပြေးခဲ့ရတာ ကိုယ် တိုင်ပါပဲ။ ၁၉၈၈ခုနှစ် (၈၈) အရေးခင်း ပေါ်လာပြန်တော့လဲ အထက်ပါ ဦးဆောင် ဆရာတော်များဟာ စာရေးသူနဲ့ ဦးခေမိန္ဒတို့က မန္တလေး တောင်ကြီးစတဲ့ ဒေသ တွေမှာ ကျန်ဆရာတော်များက ရန်ကုန်မြို့မှာ သီတင်းသုံး နေထိုင် ကြပြီး မန္တလေး သံဃာ့ခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်ကြသည့် တောင်သမန် ဦးရေဝတ၊ မစိုးရိမ်မှ ဦးကဝိန္ဒ၊ ဦးကုသလ၊ ဦး လာဘ စသည်တို့နှင့်၎င်း၊ ရန်ကုန်အဖွဲ့က ဦးပညိန္ဒ၊ ဦးဝိသိဋ္ဌ၊ဦးဝါသေဋ္ဌ စသည်တို့နှင့်၎င်း၊ လက်တွဲ၍ ကျောင်း သား ပြည်သူများနှင့် အတူ ဦးနေဝင်း၏ (၂၆)နှစ်တာ ကာလ အုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့ မဆလ အာဏာရှင်စနစ် တိုက်ပွဲ မှာ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြတဲ့အတွက် စာရေးသူက လွဲရင် ကျန်တဲ့ ဦးဆောင်သံဃာအားလုံး အနည်းဆုံး (၅)နှစ်နှင့် အထက်ထိ ထောင်ကျခံခဲ့ရဘူးတဲ့ သံဃာများ ဖြစ်ကြပါသည်။ နိုင်ငံရေး ဘုန်းကြီးတဲ့လား? အဲဒီအချိန်ထဲက ရန်ကုန်ရဟန်းပျိုအဖွဲ့ ၊ မန္တလေး သံဃာ့သာမဂ္ဂီအဖွဲ့ နာမည်များကို ကိုယ်တိုင် သုံးစွဲ ပြီး စည်း ရုံး လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါသည်။ တကယ်တော့ ရဟန်းပျိုသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်ဟာ မန္တလေးတောင်ခြေမှာ ရှေးကထဲ က တည်ရှိခ့တဲာဖြစ်ပါသည်။ ဒီနေရာမှာ သမိုင်းကြောင်းကို မဆက်ခင် ရှင်းလင်းချင်တာလေးတွေ ရှိပါသည်။ ဒါဆိုရင် ဒီလို ကိုယ်တော် တွေဟာ နိုင်ငံရေးဘုန်းကြီးတွေလား? ဘာ ကြောင့် ထောင်ကျရတာလဲ ? အာဏာ ပိုင်တွေ နောက်လိုက်တွေ စွပ် စွဲနေသလို မတရားတာတွေ လုပ်ခဲ့ကြလို့လား? စသဖြင့် မေးစရာတွေ ရှိလာတဲ့ အတွက် နောက် လူငယ်များ ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းလင်းစွာ သိရအောင် ပြောချင်ပါသေးသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သံ ဃာများအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သတ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ ဝင်ပါလာရင်၊ သို့မဟုတ်. Issue 1 Page 11 သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု ဆရာတော်များ၏ မှတ်တိုင်များ တကယ့်တော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇.
သံဃာများမှာလဲ ပရဟိတကျောင်း ပညာရေးတွေ လောကီ လောကုတ္တရာနှင့် ဆက်စပ်တဲ့ အမှန်တရား အသိ ပညာရေးတွေကို တတ်နိုင်သည့်ဘက်မှ ကူညီပြီး ဟောပြော ပို့ချ သွန်သင်ပြနေကြတဲ့ အတွက် နိုင်ငံ့အရေး လုပ် တယ်လို့ ယူဆမယ်ဆိုရင်တော့ ယူဆလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ စာရေးသူအပါဝင် လုပ်ဖော်လုပ်ဖက် သာသနာ့ညီနောင်များ အနေနဲ့ကတော့ ဟို အရင်ထဲက ပြီးခဲ့ တဲ့ စက်တင်ဘာလို ကိစ္စမျိုးတွေ၊ ပြည်သူ တွေကို အမှန်တရားတွေကို ညွှန်ပြ ဆိုဆုံးမခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ပြည်သူ တွေ ဘေးဒုက္ခ အကြပ်အတည်း ဒုက္ခများနှင့် ကြုံကြိုက်လာရင် ကူညီ ကာကွယ် ပေး ခဲ့တာမျိုးတွေ၊ ပြည်သူတွေ အပေါ် မတရား လုပ်နေတဲ့အခါ အမှန်တရားများ ဖြစ်ပေါ်အောင် ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့တာမျိုးတွေ စတဲ့ အများ အကျိုး နိုင်ငံသား များ အရေးကို ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပဲ ခံယူထားပါတယ်။ မီးလောင်မှု ဖြစ်တဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ ပိုထင်ရှားပါတယ်။ နိုင်ငံရေး လုပ်တယ် လို့တော့ ဘယ်တုန်းကမှ မယူဆ ခဲ့ကြပါဘူး။ နောက် ထောင်ကျတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောရမယ် ဆိုရင် ထောင်ဆိုတာမျိုးကတော့ အုပ်ချုပ်သူများက မျှမျှ တတ ကျောသား ရင်သား မခွဲခြားပဲ တရား ဥပဒေနဲ့ အညီ အုပ်ချုပ်ကြတဲ့ ခေတ်မှာ ဆိုးသွမ်းသူများ၊ တရားဥပဒေ ကို ကျူးလွန်သူများ၊ စတာတွေကို ထိမ်းသိမ်းထားတဲ့ နေရာဆိုတာ လူတိုင်း သိရှိပြီး .. Page 12 ဒါမျိုးတွေ လုပ်တာကို နိုင်ငံရေးလို့ ခေါ်ဆိုတယ်ဆိုရင် သံဃာများဟာ ပါတီတည်ထောင် တာလဲ မဟုတ်၊ အာဏာရယူဖို့ လုပ်ကြတာလဲ မဟုတ်ကြတဲ့ အတွက် နိုင်ငံရေးလုပ်တာ မဟုတ်ဘူးလို့ အသေအချာ ပြောရမှာပါ။ စာရေးသူတို့ ဆရာသမားများက စာဝါပို့ချရင်း ပြောဖူးတာလေး ရှိတယ်။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ စားဝတ် နေရေး ကျန်းမာရေး ပညာရေးပဲတဲ့ ဒါတွေကို တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုး စည်ပင်ဝပြောအောင် လုပ်ဆောင် နေတာဟာ နိုင်ငံရေး လုပ်တာပဲလို့ ပြောဖူးတယ်။ ဒါဆိုရင် လက်ရှိ မျက်မှောက်ကာလမှာ တကယ် တမ်း နိုင်ငံရေး (နိုင်ငံအရေးကို) လုပ်နေကြတာက ဆရာ ဆရာမတွေ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ အလုပ်သမား လယ်သမားတွေ စာရေးဆရာတွေ စတဲ့ ပြည်သူများပဲ ဖြစ်နေတာပေါ့လို့ တွေးခဲ့ဖူး တယ်။ ပြောလဲပြောခဲ့ဖူးတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ၊ နိုင်ငံ့အရေး အတွက်၊ တိုင်းပြည် တိုးတက်ရေး အတွက် တကယ် လုပ်နေကြတာ သူတို့တတွေပဲ မဟုတ်ပါလား။ စာရေးသူတို့ခေတ် အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရဆိုတာ ပြည်သူများအတွက် စားဝတ်နေရေး ပညာရေး ကျန်းမာရေး ကိစ္စတွေမှာ လောက်လောက်လားလား စေတနာ ပါပါ လုပ်တာဆိုလို့ ခုချိန်အထိ တခါမှ မကြား မမြင်ခဲ့ရဖူးဘူး။ ပြည်သူတွေဆီက ငွေညှစ်တာ၊ ငွေကောက်ခံတာ မြေယာ အိမ်နေရာတွေ ဖျက်ပြီး သိမ်းဆီး နေတာ၊ စတာတွေပဲ တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့အခါမှာ အစိုးရတွေလဲ တကယ် နိုင်ငံအရေး လုပ်ကြတာ မဟုတ်ပဲ ကိုယ့်အရေးပဲ လုပ်ကြတာပဲလို့ ယူဆခဲ့တယ်လေ။ ဒါလဲ ဟုတ်ပါသည်။ တိုင်းပြည်မှာ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေလဲ တနှစ်ထက် တနှစ် ကျဆင်းမသွားပဲ တက် တက်လာ တာ၊ လမ်းတွေလဲ ကောင်းမလာပဲ စုတ်ပြတ် လာတာ၊ သွားလာရေး စရိတ်တွေ ကြီးမြင့် လာတာတွေ၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတွေ စသည်တို့မှာ ပြေလည် မလာပဲ ပိုမို ကြပ်တည်းလာတာတွေကို ထောက်ရှုသောအားဖြင့် အုပ် ချုပ်သူတွေဟာ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများရဲ့ အရေးကို (နိုင်ငံရေးကို) အမှန်တကယ် မလုပ်ကြပဲ ကိုယ့် ချမ်းသာရေးကိုသာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ် ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ ငြင်းလို့ မရတဲ့ အထောက်အထားများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည် တိုးတက်တယ်ဆိုတာ ပြည်သူတွေ စားဝတ်နေရေး ကျန်းမာရေး ကိစ္စတွေမှာ တနှစ်ထက် တနှစ် ပို ၍ သက်သက် သာသာ ချောင်ချောင် ချိချိနဲ့ သုံးစွဲ စားသောက် နေထိုင် သွားလာနိုင်ပြီဆိုမှ တိုးတက်တာလို့ ယုံ ကြည်ထားတယ်လေ။ အဲဒီတော့ တကယ်လို့များ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ပြည်သူတွေ စားဝတ်နေရေး ကျန်းမာရေး ပညာရေးများကို ပြေ လည် တိုးတက်အောင် လုပ်တာကို နိုင်ငံ အရေးပါလို့ ဖွင့်ဆိုသင့်တယ်ဆိုရင်၊ နောက် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ပြော ခဲ့သလို နိုင်ငံရေး ဆိုတာ လူတွေ သွားလာ လှုပ်ရှား ရုန်းကန်နေတာဖြစ်ပြီး မွန်မြတ်တဲ့ အလုပ်လို့ ဆိုရင်တော့.
Issue 1 Page 13 ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို တရား ဥပဒေနဲ့ အုပ်ချုပ်တဲ့ ခေတ်မှာ ပြည်သူတွေ အကြပ်အတည်းဖြစ်လာရင်၊ တရားမျှတမှု မရှိကြရင်၊ အုပ်ချုပ်သူများ မတရား လုပ်လာရင်၊ ကျေနပ်မှု မရှိကြရင်၊ ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ ပြန်တင်ပြခွင့် တောင်းဆိုခွင့်၊ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခွင့် အမျိုးမျိုးကို လုပ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး တွေရှိရမယ်။ ဖမ်းဆီးခွင့် မရှိရဘူး ဆိုတာတွေကိုလဲ သိရှိကြပြီး ဖြစ်ပါ လိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိ အနေအထားတွေကိုတော့ အားလုံး သိပြီး ဖြစ်တ့အဲတိုင်း ဒီအခွင့်ရေးများကို တောင်းဆို လို့၊ ပြည်သူတွေ ကြပ်တည်း ငတ်မွတ်နေတဲ့ အတွက် ထုတ်ဖော်ပြသလို့ ဖမ်းဆီးပြီး ထောင် ထဲထည့်ထားတဲ့ လူ တွေကို လူဆိုးတွေ တရားဥပဒေ ချိုးဖောက်သူတွေလို့ ဘယ်လိုမှ ပြောလို့ မရပါဘူး။ အထူးသဖြင့် တရားဥပဒေ မရှိတဲ့ ခေတ်၊ နောက် ကိုယ် ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ဥပဒေကို ကိုယ် ကိုယ်တိုင် မလိုက်နာကြတဲ့ ယခုလို ခေတ်မျိုးမှာဆိုရင် အဲဒီ ဥပဒေဟာ ဥပဒေ မမြောက်ဘူးလို့ပဲ သံဃာအများစုက ယူဆထားပါသည်။ ပြည်သူတွေ ဒုက္ခမျိုးစုံရောက်နေတာ ပြည်သူတွေကို ဒုက္ခပေးနေတာကို သံဃာများက မရှုစိမ့်နိုင်လို့ ကူညီ ဆောင်ရွက်တာ၊ သိစေတာ၊ လမ်းတွေ မှားနေကြလို့ အမှန်တရား လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်ရှိလာအောင် လမ်းပြ ပေးတာကို အကြောင်းမျိုးစုံပြပြီး ဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့တယ် ဆိုတာကိုလဲ အားလုံး အသိပင်ဖြစ်လို့ စစ်အာဏာရှင် တွေ ပြောသလို ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင် ကိုယ်ပိုင် ဉာဏ်နှင့်သာ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ယူကြစေလိုပါသည်။ ယနေ့ခေတ် ထောင် ဆိုတာ အမှန်တရားကို လိုလားသူတွေရဲ့ ခိုနားရာ နေရာတခုလို ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီအဖြစ်ဆိုး စနစ်ဆိုးများကို ဧကန်မုချ တနေ့မှာ ကြုံတွေ့ကြရလိမ့်မည် ဆိုတာကိုတော့ ဟို လွန်ခ့တဲ့ နှစ် ပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော်ထဲက ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်က ဆိတ်ကို မြင်လို့ ကြောက်လန့် ဒူးတုန်နေတဲ့ သစ်တွေကျားတွေ ခြင်္သေ့များကို အိပ်မက် မက်တ့အဲကြောင်း မေးလျှောက်လာတဲ့ ဘုရင်ကောသလကို. Volume 1. လူယုတ်မာတွေ အဓမ္မ စီမံ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ လူလိမ္မာ၊ သူတော်ကောင်း ပညာရှိတွေဟာ ပုန်းသူ ပုန်းကြရ ပြေးသူ ပြေးကြရ တောခို သူ ခိုကြရ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ဟောခဲ့တယ်ဆိုတာ သတိချပ်မိကြမှာပါ။ သာသနာနှစ် နှစ်ထောင်ကျော်ရင် ဒီဖြစ်ရပ်မျိုး ဖြစ်ကို ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဟောခဲ့တာပါ။ ဒါကို အလင်္ကာဖွဲ့တဲ့ ဆရာက “ဆိတ်ကို မြင်ငြား၊ ကြောက်အား ပြင်းထန်၊ ခြင်္သေ့ သစ်ကျား၊ ခုန်လွှား ပြေးပြန်။ လူယုတ်မာများ၊ ထောင်လွှား နိုင်ငံ၊ သူတော်ကောင်း၊ ပုန်းအောင်း တောမြိုင်ယံ။” လို့ ဖွဲ့သီခြဲ့ ကပါတယ်။ ဒါပါပဲ စနစ်ဆိုးတွေနဲ့ အုပ်စိုးနေကြတဲ့ လူဆိုး လူယုတ်မာတွေ အုပ်ချုပ်တဲ့ နိုင်ငံမှာ အမှန်တရားကို လိုလားပြီး တန်ဘိုးထားတဲ့ သံဃာတွေ သူတော် ကောင်းတွေကို ဖမ်းဆီးတာ ထောင်ချတာ သတ်ပစ်တာကတော့ မထူးဆန်း ပါဘူးလို့ပဲ ပြောရပါမည်။ လူဆိုး လူယုတ်တွေသာ တိုင်းပြည်မှာ အဓမ္မ နေရာယူပြီး ထောင်လွှားနေကြလို့ အမှန် တကယ် တတ်ကျွမ်းတဲ့ ပညာရှင်တွေမှာလဲ ဘေးရောက်သူရောက် သူတပါး နိုင်ငံ ထွက်လို ထွကန်ဲ့ ဖြစ်နေတာ ကို အသိဉာဏ်ရှိသူတိုင်း သိနေကြပါတယ်။ စနစ်ဆိုးတွေ လူဆိုး လူယုတ်မာတွေ ကင်းစင်အောင် လုပ်ဆောင် နိုင်ဘို့ဆိုတာ သူတော်ကောင်းတွေ အမှန်တရား လိုလားသူ လွတ်မြောက်လိုသူတွေရဲ့တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။ မေး= တပည့်တော်သည် ၁၉၈၈ အရေးအခင်းပြီးမှ မွေးဖွားခဲသော မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါသည်၊၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး တွင် တပည့်တော်ဘဝမှာ တခါမှ မကြုံဖူးသည့် များပြားလှသည့် သံဃာထုကြီးသည် လမ်းမပေါ်မှာ လမ်းလျှောက် မေတ္တာ ပို့ကြသည်ကို မြင်ရပြီးတော့ စိတ်ထဲ မှာ ပြောမပြတတ်အောင် ကြည်နူးပြီး သံဃာတွေနောက် လိုက်လျှောက် ရင်း စစ်တပ်၏ လက်နက်ဖြင့် ဖြိုခွင်း ခံရပြီးနောက် စစ်အစိုးရ မီဒီယာများနှင့် အချို့သော လူကြီးများ ဘုန်းကြီးများကပါ နိုင်ငံရေးပယောဂကြောင့်သာ သံဃာတွေ လမ်းလျှောက် ပရိတ်ရွတ် တာဖြစ်တယ်၊သံဃာအစစ် သံဃာအမှန်သက်သက်ဆို လျှင်ဒီလိုမလုပ်ကြောင်းပြောကြတော့ တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာ သံဃာတွေ ဒီလိုလုပ်သင့်၊မလုပ်သင့် ယနေ့တိုင် မဝေခွဲနိုင်ပါဘုရား၊ဒါကြောင့် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကို ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ အရှင်ဘုရားတို့ သံဃာတပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကြီးရဲ့ အီးမေလ်းကိုရလို့ ယခုလို မေးမြန်းလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်ဘုရား။ ဖြေ=ဒီမေးခွန်းရဲ့ အဓိကအချက်အဖြစ် နိုင်ငံရေးပယောဂကြောင့်သာ သံဃာတွေ လမ်းလျှောက် ပရိတ်ရွတ်တာဖြစ်တယ်၊ သံဃာအစစ် သံဃာအမှန် သက်သက်ဆိုလျှင် ဒီလိုမလုပ်ကြောင်းပြောသူကပြော၍ သံဃာတွေ ဒီလိုလုပ်သင့်၊မလုပ်သင့် သိလိုရင်းလို့ထင်ပါတယ်၊ ဝေသာလိယာ တီသု ပါကာ ရန္တရေသု တိယာမရတ္တိံ ပရိတ္တံ ကရောန္တော အာယသ္မာ အာနန္ဒထေရော ဟူသော ရတနသုတ်နိဒါန်းတွင် ဘုရားရှင်လက်ထက်က ဝေသာလီပြည်မှာ ရောဂါဘေး၊ဘီလူးသရဲဘေး၊ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးဘေးဆိုတဲ့ ဘေးကြီးသုံးမျိုးနဲ့ ကြုံချိန်မှာ အရှင်အာနန္ဒာ ဦးဆောင်တဲ့ သံဃာတော်များက သတ္တဝါတွေအပေါ် သနားကရုဏာ မေတ္တာ ထားကာ ဝေသာလီပြည်ရဲ့ တံတိုင်းသုံးထပ် အတွင်းလှည့်လည်၍ ဉာဉ့်သုံးယာမ်ပတ်လုံး ပရိတ်တော်များ ရွတ်ဖတ်ခ့ေဲကြာင်း အထင်အရှားရှိ ထားသောကြောင့် မြန်မာပြည်၌ ဆေးဝါးမကုသနိုင်၍ ရောဂါဘေး၊လက်နက်အာဏာအားကိုးကာ အုပ်ချုပ်သူ ဘီလူး သရဲဘေးနှင့် ဝင်ငွေနှင့်မမျှအောင် ကုန်ဈေးနှုန်းတွေမတရား ကြီးမြင့်၍ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးဘေးဆိုက်နေတဲ့ အချိန်မှာ သံဃာတော်များ ထိုက့သဲို့ လုပ်သင့် မလုပ်သင့် နှိုင်းချင့်က သိနိုင်ကြပါလိမ့်မည် ဟုသာ ဖြေလိုက်ပါသည်။ ချွင်းချက်=နိုင်ငံရေး ပယောဂကြောင့်သာဟုပြောဆိုမှုသည် နအဖလက်ထက် မိစ္ဆာစစ်ခေါင်းဆောင်တို့စီစဉ်သည့် မြန်ုမာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့တငွ် မြေပြင်ကပြည်သူတွေ ဘာမှမသိရပဲ ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် ဝေဟင်ပေါ်က ပရိတ်ရွတ်ကြသော မဟန(နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့)၏ လုပ်ရပ်အတွက်မူ မှန်ကန်ပါသည်၊မလုပ်သင့်ပါ။ ..
.. သမီးလေးရှိတဲ့ နေရာကို မေမေ ပြန်လာလို့ ဆိုပြီး ကြည်နှုးနေခဲ့တာ။ ဖေဖေရော မေမေကရော သမီးလေးကို ချစ်သလို မရတော့ဘူး။ အားလုံးပြီးသွားတဲ့ အချိန်မှာ မေမေ့ ရင်တွေပူလာတယ်။ ဘဲ ၊ မေမေတို့ရဲ့ အမိမြေကြီးကိုလဲ ချစ်ခဲ့တာဘဲ၊ သမီးလေးကြီးရင် နားလည် သမီးလေး နို့များ ဆာနေပြီလား။ အမေ့ရင်ငွေ့ မရတဲ့ သမီးလေး လွမ်း လာမှာပါကွယ်။ ဆွတ်နေပြီလား ။ သမီးရေ.. Page 14 ကုန်ဈေးနှုန်းတွေက ပိုတက်သွားတော့ တာပေါ့။ ကြယ်စင်သို့တမ်းချင်း တိုင်းသူပြည်သားတွေ ဒုက္ခရောက်နေတာကို ဖေဖေတို့တွေက ကမ္ဘာ ခင်ငြီမ်းသစ် သိအောင် ဖေါ်ထုတ်ခြဲ့ ကတယ်။ ဒီတော့ သမီးဖေဖေကို သူတို့ဖမ်းသွား တာပေါ့။ “၈၈” မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ အကုန်လုံးကို ဖမ်းထားလိုက်ကြတယ်။ ဖေဖေတို့ မရှိတော့ မေမေနဲ့ အန်တီ မီးမီး ၊ NLD ပါတီဝင် တချို့နဲ့ ကျန်ခဲ့တဲ့ တက်ကြွသူတွေ ပူးပေါင်းပြီး မေမေတို့ အမှန်တရားတွေကို ဆက်ဖေါ် ထုတ်ခြဲ့ ကတယ်။ သမီးရေ… မေမေတို့ ဆက်ပြီး ချီတက် ဆန္ဒပြကြတာပေါ့ ၊ ၁၉၉၆နောက်ပိုင်း ရန်ကုန်မှာ မရှိခဲ့ဘူးတဲ့ လူဦးရေတွေနဲ့ မေမေတို့ လှည်းတန်းကနေ ၈မိုင်အ ထိ ချီတက်ခဲ့ကြတယ်။ ဝင်မပါရဲတြဲ့ ပည်သူတွေကလဲ လက်ခုတ်တီး ပြီး ထောက်ခံကြတယ်။ ခံပြင်းနေတဲ့ ပြည်သူတချို့ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြဲ့ ကတယ်။ သမီးရေ… လမ်းမပေါ်မှာ လူတွေပြည့်နေတယ်။ တိုက်ပေါ်က လူတွေက အားပေးခဲ့ကြတယ်။ သမီးရေ… မေမေတို့ သွားတဲ့လမ်းက ချောမွေ့မနေပါဘူး။ စစ်တပ် လက်ကိုင်ဒုတ်တွေက မေမေ တို့ကို နှောင့်ယှက်တာပေါ့။ မေမေတို့မှာ အတွေ့ အကြုံကောင်းတွေ ရှိတယ်လေ သမီးရဲ့ ၊ စည်းကမ်းတကျ ဖြစ်ဖို့ မေ သမီးရေ .. မေမေတို့က သမီးကို ကိုယ်ဝန်စဆောင်တဲ့ အချိန်ထဲက အရမ်း မေတို့ ထိန်းတတ်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ အဲဒီနေ့ကို မေမေတို့ စနစ်တဲတယ်။ ကျ ကျော်ဖြတ် ခဲ့ကြတယ်။ ချစ်ခဲ့တာ၊ သမီးလေးရဲ့ ရုပ်ပုံလေးကို မှန်းဆကြည့်ရင်း ပျော်ရွှင်ခ့ရ မိန်းခလေးဆိုရင် ဘယ်လိုပုံစံလေး၊ ယောင်္ကျားလေးဆိုရင် ဘယ်လိုပုံစံလေး ဒါပေမယ့် သမီးလေးရယ်... ခေတ်ဟောင်းတွေထဲက ကနေမှ ခေတ်သစ်ကို ပြောင်းတာ မေမေ သိပ်စိုးရိမ်နေမှန်း သိလို့ မေမေရဲ့ ရဲဘော် မစန္ဒာမင်းက သမီးလေးကို သမီးရဲ့ ၊ ခေတ်ဆိုးထဲက ဖေါက်ထွက်မှ ခေတ်ကောင်းရဲ့ တံခါးဝကို ခြေချ သွားခေါ်ပေးတယ်။ သမီးကို ရင်ခွင်ထဲ ပွေ့လိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာ မေမေ့ ခွင့်ရမှာလေ ဒါကြောင့် မေမေတို့က လှုပ်ရှား မှုတွေကို စတင်ဖို့ ဆုံးဖြတ် ရင်ထဲက အလွမ်းတွေ ငြိမ်းသွားတယ်။ စိုးရိမ်သောကတွေ အေးသွားတယ်။ လိုက်တာပေါ့။ သမီးကို မေမေချစ်သလိုဘဲ အခြားအမေတွေလဲ သူတို့ရဲ့ သားသမီးတွေကို ဖေဖေက သမီးကို တိုင်းပြည်ကို ချစ်တဲ့ မေမေတို့ရဲ့ မျိုးဆက်သစ် ချစ်ခင်မှာပဲလေ။ သမီးကို မေမေတိုးတက် စေချင်သလို အခြားအမေတွေရဲ့ သိပ်ဖြစ်စေချင်တာပေါ့ ။ ပြီးတော့ ဥာဏ်ရည်လဲ ထက်မြက်စေချင်တယ်လေ။ ရင်ထဲမှာလဲ ဒီလို ဆန္ဒတွေ ရှိနေမှာပါဘဲ။ ဒါကြောင့် သမီးလေးကို မမွေးခင်က မေမေ့ ဗိုက်ထဲမှာ ကတည်းက သမိုင်း ဒီတော့ မေမေက သမီး အပါအဝင် နောက်မျိုးဆက်တွေရဲ့ ဘဝအတွက် စာအုပ်တွေ ဖတ်ပြတယ်လေ။ မေမေကတော့ မေမေတို့ရဲ့ လှုပ်ရှား မှုတွေ လွတ်လပ်ခွင့်တွေ ၊ မိမိကိုယ် မိမိ ပိုင်နိုင်ခငွ့်တွေ အတွက် မေမေတို့ အကြောင်းကို သမီးကြားအောင် ပြောပြခဲ့တယ်။ တိုက်နေရ တာပါ။ ဒီအတွက် မေမေ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဘဝမှာတော့ မိသားစုတွေ သမီးလေးက ဖေဖေ့ဘက်မှာရော မေမေ့ဘက်မှာပါ မြေးဦးလေး ဆိုတော့ တကွဲ တပြားစီ နေကြရတယ်။ သမီးရဲ့ အဒေါ် မသန္တာက သမီးကို ချစ်လွန်းလို့ သူ့ကို အပြီးပေးပါတဲ့၊ သမီးလဲ မေမေကို လွမ်းနေမယ်ထင်တယ်။ မေမေ့ ရင်ခွင်ထဲ ရောက်မှ သူမွေးမယ် တဲ့ လေ။ သမီးက စိတ်ချလက်ချ အိပ်သွားတယ်ကွယ်။ မေမေသနားလိုက်တာ ။ တဒင်္ဂ သမီးရယ်.. အိမ်ပြန်လို့ မရတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မေမေ့ မိတ်ဆွေတွေ အိမ်မှာ ရှောင် ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ တကြိမ် ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာတကြိမ် စက်သုံးဆီဈေး ပုန်းနေခဲရ့တယ်။ ရှောင်ပုန်းနေရတဲ့ အချိန်မှာ သမီးကို ထွေးပွေ့ထားရ နှုန်းတွေ မြင့်တက်သွားတော့ နဂိုကမှ ဈေးနှုန်း မတည်ငြိမ်ရတဲ့ အထဲ ရင် မေမေက စိတ်ကျေနပ်နေတာ။ . သမီးရဲ့ ဘ၀က ပြည့်စုံပါတယ်။ လိုအပ်နေတာက သမီး အနား အတွင်းမှာတော့ မေမေ့ သမီးလေးကို ချီပြီး လွတ်ရာလွတ်ကြောင်း မှာ ဖေဖေနဲ့ မေမေ ရှိနေဖို့ပဲလေ ။ ဒါပေမယ့် သမီးရယ် နွမ်းပါးနေတဲ့ ဘ၀ တနေရာကို ပြေးသွားလိုက် ချင်ပါတယ်။ မပြည့်စုံသူတွေ အတွက် မေမေနဲ့ ဖေဖေ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ ဒါပေမယ့် သမီးဖေဖေ အပါအဝင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အတွက်၊ အတွက် သမီးဂုဏ်ယူပါနော် ။ ခိုကိုးရာမဲ့ ပြည်သူတွေ အတွက် မေမေ မပြေးဖြစ်ပါဘူးကွယ်။ မေမေ သမီးရေ ..မေမေတို့ တိုင်းပြည်ကလူတွေ စီးပွါးရေး ကြပ်တည်းနေကြတယ်..
တဲ့ ချီတက်ပွဲကို စတင်ခြဲ့ ကတယ်။ ၁။အမွန်မြတ်ဆုံးဆုလာဘ်ဟု ဆိုရမည့် ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ကျမ္မာရေးကောင်း မွန်အောင် သမီးရေ… ပြည်သူတွေကလဲ သောင်းသောင်း ဖြဖြ ပါဝင်ကြတယ်။ အဲဒီ ဂရုစိုက်ရမည်။ ၂။ကိုယ်ကျင့်တရား အလေးထားရမည်။ ၃။အသိ ပညာရှင်၊အတတ် အချိန်တွေမှာ မေမေ စဉ်းစားနေတာက တကယ်လို့ ဒီပွဲကြီးဟာ စစ်အစိုးရ ပညာရှင်တို့၏ လမ်းညွှန်မှုကို လိုက်နာရမည်။ ၄။မိမိလုပ် ကိုင်မည့်လုပ်ငန်းနှင့် ကို ဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့ရင် မေမေနဲ့ ချစ်သမီး ခွဲနေဖို့ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ ပြီးတော့ ဖေ ပါတ်သက်၍ အမြဲတမ်း လေ့လာဆည်းပူးနေရမည်။ ဖေ လဲ မေမေတို့ သားအမိဆီကို ပြန်ရောက် လာမယ်လေ။ ၅။ကြံစည်၊တွေးခေါ်၊ပြောဆိုမှုမှစ၍ ဒုစရိုက်မှုကင်းရမည်။ ၆။ပျင်းရိ တွန့် သမီးရယ်… စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ဟာ အမေတို့ တိုင်းပြည်မှာ ငရဲပွက် လိပ်သောစိတ်ကိုဖျောက်၍ ထက်သန် ဖြောင့် မတ်သောစိတ်ဓာတ်ရှိရမည်။ ခဲ့တယ်။ ရက်စက်တယ်။ ယုတ်မာတယ် ဆိုတဲ့တာင် ဤအချက် ၆ ချက်သည် လွန်ခ့သ စကားတွေန့ေဲည့် နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ကျော်ကာလက မြတ်ဗုဒ္ဓ မလုံလောက်တော့အောင် လုပ်ရက်ခဲ့ကြတယ်။ ၂၆ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ ချမှတ်ခ့ေဲသာ လောကီလောကုတ္တရာ နှစ်ဖြာလုံးမှာ ကြီးပွားတိုးတက်ကြောင်း လမ်းစဉ် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ ထဲကိုဝင်ပြီး ရက်ရက် စက်စက် ရိုက်နှက် များဖြစ်သော်လည်း ယခုခေတ်နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီး အသီးသီးမှာ ချမှတ်ကျင့်သုံးနေသော စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပေါ်လစီများ၏ အခြေခံအုပ်မြစ်အ ဖြိုခွင်းခဲ့ကြတယ်။ ဖြစ် ကျင့်သုံး၍ ၂၁ ရာစုရဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသရဖူကိုရယူနေနိုင်ကြသည်မှာ နိဂုံးပိုင်းကို နောက်တပါတ်ဂျာနယ်တွင် ဆက်လက်ဖေါ်ပြပါမည်။ လက်တွေ့ကျင့်က အကျိုးရသည့် ဗုဒ္ဓတရားတော်၏ သန္ဒိဋ္ဌိကဂုဏ်တော် ကြီးပင်ဖြစ်သည်။ ခင်ငြိမ်းသစ် ဓမ္မဃောသက . Issue 1 Page 15 မေမေသတိမပြုမိ တာက ကလေးငိုသံ ကြားရင် ပတ်ဝန်းကျင်က ရိပ်မိသွား မယ်ဆိုတာကိုလေ။ ဒီတော့ သမီးအဒေါ် မသန္တာကရော ၊ မေမေ့ သူငယ်ချင်းတွေ ကပါ သမီးကို ယခုတပတ် တရားတော်ကဏ္ဍတွင် ဧကကနိပါတ် အတ္ထဿဒွါရ မသန္တာဆီ ပြန်ပို့ဖို့ တိုက်တွန်းကြတယ်။ ပထမတော့ မေမေက ဘာ ဇာတ်တော်ကို ဖော်ပြပါမည်၊ဤတရားတော် ဖြစ်ပေါ်လာသည်မှာ အလွန်တ ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြန်မပို့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်း ကျတော့ ရာအံ့သြစရာ ကောင်းလှပါသည်။ သမီးလေး အနေအထိုင် ဒုက္ခရောက်တယ်။ မေမေ သမီးကိုကြည့်ပြီး စိတ်မ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ၇ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်က သူ့ဖခင်ကို ကောင်းဘူး။ “ကြီးပွားတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်း လမ်းစဉ် တွေကဘာတွေလဲ” လို့ မေးတဲ့အမေးကို ဖခင်ဖြစ်သူက ရိုးသားစွာ မသိကြောင်း ဝန်ခံပြီး ဆရာအရှင် သမီးကို သနားတာနဲ့ မေမေ့ရဲ့ ဆန္ဒတွေကို စွန့်လွှတ်ပြီး မသန္တာ ဘုရားသခင် ရှိရာ ဇေတဝန်ကျောင်းသို့ သွားပြီး “အရှင်ဘုရားရေ ဒီက လေးက ကို ပြန်ပေးလိုက်တယ်။ သမီးအတွက် စိုးရိမ်နေတဲ့ ဖိုးဖိုး၊ ဖွားဖွား၊ အဒေါ်၊ ကြီးပွားတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်း လမ်းစဉ် တွေကဘာတွေလဲ လို့ မေးတဲ့အမေးကို ဦးလေးတွေ စိတ်ချမ်းသာသွားတယ်။ မေမေ့အတွက်တော့ သမီးနဲ့ ဝေးကွာ တပည့်တော် မဖြေနိုင်လို့ သူ့ကိုပါအရှင်ဘုရား ဆီ ခေါ်လာတာပါဘုရား၊အဲဒါ တဲ့ ရက်တွေဟာ အသက်ရှင်လျှက်နဲ့ အသိမ့ေဲနရတဲ့ ရက်တွေပါပဲ သမီးရယ်။ အရှင်ဘုရား ရှင်းပြပေးပါဘုရားလို့ ” လျှောက်တော့ ညတိုင်းဆိုရင် သမီး ငိုသံကို မေမေ လွမ်းတယ်။ ငိုတယ်ဆိုတာက သမီးနဲ့ အာရောဂျမိစ္ဆေ ပရမဉ္စ လာဘံ၊သီလဉ္စ ဝုဒ္ဓါနုမတံ သုတဉ္စ။ မေမေရဲ့ နက်ရှိုင်းတဲ့ ဆက်သွယ်မှုလေ၊ တခါတရံ ညသန်းခေါင်မှာ မေမေ ဓမ္မာနုဝတ္တီစ အလီနတာ စ၊အတ္ထဿ ဒွါရာ ပမုခါ ဆဠေတေ --ဆိုပြီး ဟောခဲ့ လို့ ယောင်ယမ်းပြီး သမီးလေးကို ထစမ်းမိတယ်။ တရေးနိုးတဲ့ အချိန်မှာ တွေးမိ ဒီတရားတော် ဖြစ်ပေါ်လာရတာပါပဲ။ တာက သမီးလေး နိုဗူးများ စို့နေပြီလား။ သမီးက မေမေ့ကို အပြစ်တင်နေမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာဖခင်တယောက်အနေနှင့် ထိုဖခင်နေရာမှာ လား။ နားလည်ပေးမှာလား။ သမီးလေးကို မမွေးခင်က မေမေ စိတ်ကူးယဉ် သင် ဖြစ်ခ့ပဲါက …….ဆိုပြီး၊မတော်တဆများ လူကြားသူကြား ဖြစ်လို့ သမီးရေ… မေမေတို့တိုင်းပြည်က ဗုဒ္ဓဘာသာ တိုင်းပြည်ကွဲ့ ။ တိုင်းပြည်ရဲ့ ….... မဖြစ်နိုင်ဟု တွေးမိပါက သင်သည် အထွဋ် အမြတ်ဟာ ဘုရားစေတီ ပုထိုးနဲ့ ဗုဒ္ဓသားတော် ရဟန်းသံဃာတွေဘဲ လူ့အခွင့်အရေး အလေးထားနားလည် သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းတယောက် ဖြစ်ဖို့ ကွဲ့။ မေမေတို့ တိုင်းပြည်ရဲ သမိုင်းမှာ သံဃာတော်တွေဟာ ရှေ့တန်းကပဲ ကြိုးစားရန်သာဖြစ်သည်။ ပါဝင်ခြဲ့ ကတယ်။ ခေတ် အဆက်ဆက် တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုး အကျိုးကို ကာ သင့်ကိုယ်သင် မပြုပြင်ပါက၊ထိုဖခင်သည်သာ သင့်လိုဖခင် ဖြစ်ခဲ့ ပါက ကွယ်ပေးကြတယ်။ ဤတရားတော်ကို ယခုအခါ ကျွန်ုပ်တို့ နာကြားခွင့်၊သိခငွ့် ရလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ကလေးပင်ဖြစ်စေကာမူလူသားတယောက်ရသင့်သောလွတ်လပ်စွာတွေးေ ပြည်သူတွေရဲ့ ဆင်းရဲ ဒုက္ခကို အနီးကပ်ဆုံး မြင်တွေ့ခွင့် ရတဲ့သူတွေဟာလဲ တာပြောဆိုခွင့်ရှိရမည်ဟူသော လူ့အခွင့်အရေး အလေးထားနား လည်သည့် သံဃာတော်တွေပဲ သမီး။ ပြည်သူတွေ ဆင်းရဲရင် သံဃာတွေလဲ ဆင်းရဲကြ ဗုဒ္ဓဘာသာဖခင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်မှု၊ မင်းကအဖေလား ငါ ကအဖေလား စသော တယ်။ တလွဲမာနမထားမှု၊အသက် သိက္ခာ ဂုဏ်ဝါကိုမဖက် တွယ် မသိသည်ကို ဒီတော့ စက်တင်ဘာလ ၅ရက်နေ့မှာ ပခုက္ကူ သံဃာတွေကစလို့ သံဃာထု မသိကြောင်းဝန်ခံ၍ သိနိုင်မည့် နည်းလမ်းကိုရှာ ကြံပေးသော ဖြုစင်ဖြောင့်မတ်သော ကြီးဟာ မြို့တိုင်း နယ်တိုင်း ရွာတိုင်းမှာ ပြည်သူတွေကို မေတ္တာပို့ ဆုတောင်း စိတ်ရှိသည့် ဖခင်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ သိခွင့်ရလိုက်သော ကြီးပွားတိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း လမ်းစဉ် တွေ ကတော့. သင်ကိုယ် တိုင် ဘူးတယ်။ ဖေဖေရယ် မေမေရယ် ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ သမီးလေးရယ် ဘုရား ထိုကလေးရဲ့ အမေးစကားကို သေချာနားထောင် ထိုဖခင် နေရာဝင်၍ သွားမယ်။ လျှောက်လည်ကြမယ်။ ဒါပေမယ့် သမီးရယ် ၃လပဲ ရှိသေးတဲ့ သေချာစဉ်းစားပြီးမှ ဟုတ်ကဲ့ ဖြစ်နိုင်ပါသည် ဟု ဖြေလျှင် သင်သည် လူ့အ ခွင့် သမီးကို မေမေတို့ ဘယ်မှတောင် ခေါ်မသွားဖြစ်သေးဘူးကွယ်။ အရေးကို အလေးထားနားလည်သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းတယောက်ဖြစ် ပြီး၊ ဟာ… ဒီကလေးတော့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်….ဤတရားတော် ဖြစ်ပေါ်လာပါမည်လော ?.. Volume 1.. လူကြီးမာန် ကြောင့် ဆူငေါက်မိမှာမို့ ….
com) ကို ရိုက်ထည့်။ အလွယ်ဆုံး လိပ်စာ တစ်ခုပါ။ ဒါမှမဟုတ် မိမိနှစ်သက်ရာ လိပ်စာကို သုံးနိုင်ပါသည်။ ထိုအခါ Reply from ဆိုတဲ့ စာတမ်းနဲ့အတူ အောက်ပါ 32bit ဂဏန်းလေးလုံးတွဲတစ်ခုကို ရရှိပါမည်။ 64..181.ပထမဆုံး start ထဲက run ဆိုတဲ့ အိုင်ကွန်လေးကိုနှိပ်ပြီး အထဲမှာ cmd (သို့) command ကို ရိုက်ပြီး enter (သို့) OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ အခု ပုံအတိုင်း တွေ့ရပါမယ်။ နောက်ခံအမည်း စာတမ်းအဖြူနဲ့ အဲဒါကို (console screen) လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီ ထဲမှာပေါ်နေတဲ့ စာတမ်းရဲ့ နောက်ကဆက်ပြီး ipconfig လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက် လိုက်ရင် အောက်ပါ အတိုင်း ပေါ်လာ ပါလိမ့်မယ်။ အခုပုံမှာ LAN ကြိုးချိတ်ကန်ွပျူတာများ တွင်ပေါ်သော ပုံဖြစ်ပါတယ်။ Wireless သုံးသူများတွင် နောက်နံပါတ် တမျိုးပေါ်ပါသည် ။ နောက်တစ်ဆင့်က အင်တာနက် လမ်းကြောင်းကို စစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံထဲက စာတမ်းရဲ့နောက်မှာ “ping” (Packet Internet or Intranet Groper) ကိုရိုက်ထည့်ပြီး စစ်ကြည့်မယ်။ အောက်ကပုံအတိုင်းပေါ်လာပါမယ်။ အထက်က အတိုင်းပဲ အဲဒီနောက်မှာ ping localhost စာတမ်းကို ရိုက်ထည့်ပြီး မိမိကွန်ပျူတာမှ လက်ခံ လမ်းကြောင်းကို စစ်ပါတယ်။ ပေါ်လာတဲ့ စာတမ်းနောက်မှာ ထပ်မံပြီး ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာကို ရိုက်ထည့်ပါ။ ဥပမာ Google သုံးချင်တယ်ဆို (ping www.google..103 (နံပါတ်တွေက မတူပဲ ပြောင်းလဲ နိုင်ပါသည်)။ အဓိကကတော့ အဲလိုရိုက်လိုက်တဲ့အခါ reply ပြန်လျှင် မိမိအင်တာနက်လိုင်းကောင်းပါသည်။ ဘာနံပါတ်ပဲပေါ်ပေါ် မိမိဆီမှာ ပေါ်လာတဲ့ နံပါတ် ကိုယူပြီး မိမိရဲ့ address bar မှာ ရိုက်ထည့်ပြီးသွားကြည့် ပါက ပိုမို လျင်မြန်စွာ မိမိကြည့်ချင်တဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာကို မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ကပုံလေး အတိုင်း ပါ။ မှတ်ချက် ။ ။ ping ကို အသုံးပြု၍ ရသော်လည်း (၁) အင်တာနက်တပ်ဆင်ပေးသော ကုမ္ပဏီ မှ ချွတ်ယွင်းခြင်း (၂) spy ware ၀င်ရောက်နှောက်ယှက်ခြင်း တို့ကြောင့်လည်း အင်တာနက်စာမျက်နှာ မပေါ်ဘဲ offline ဖြစ်နေတတ်ပါသေးတယ်။ (ဆက်လက်ဖေါ်ပြပါဦးမည်။) ဆရာကျော် .233.. Page 16 အင်တာနက်လိုင်းပျက်တာလား။ ကွန်ပျူတာက လက်မခံတာလား အခုတလော အင်တာနက် သုံးမရဘူးဆိုပြီး ပြောတဲ့လူတွေ တော်တော်များလာတယ်။ ကိုယ့်ကွန်ပြူတာရဲ့ ညာဘက်ထောင့် အစွန်မှာ ကွန်ပျူတာ အသေးနှစ်ပုံ (သို့) ၀ါယာလက် တိုင်ငယ် လင်းနေပေမယ့် အင်တာနက် မရတာများနေတယ်။ ဒီအခက်အခဲမျိုး လူတွေ တော်တော်များများကြုံနေကြတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာရင် အင်တာနက် ပျက်တာလား တခြား ချို့ယွင်းချက်လားဆိုတာ အခုလို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ အင်တာနက် သုံးသူ တော်တော်များများက ကွန်ပျူတာ အကြောင်း နားလည်ချင်မှ နားလည်မယ်။ ဒါပေမယ့် အင်တာ နက် အကြောင်း နားလည်ချင်ကြတယ်။ အင်တာ နက်က လွတ်လပ်စွာ ဆက်သွယ်လို့ရတယ်။ ဖုန်းလို ပြောလို့ရတယ်။ နောက်လုပ် နိုင်တာ တွေလဲ အများကြီးပါ။ Internet အင်တာနက်ပဲပြောပြော Intranet အင်ထရာနက်ပဲ ပြောပြော အားလုံးနီးပါးမှာ အခုပြောတဲ့ ကိစ္စကို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ ကဲ… စကြရအောင်.
Issue 1 Page 17 နအဖ လက်ပါးစေများရဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်း ဖိနှိပ် ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးက အနိုင်ကျင့်မှုများကို ဒေသခံများ ရင်ဖငွ့်ပြောကြား ဒုက္ခသည်များအား ပြန်မပို့ရန် တောင်းဆို စစ်ကိုင်းတိုင်း ရွှေဘိုခရိုင် ဒီပဲယင်းမြို့နယ် ဆပ်ပြာကျင်းကျေးရွာ(၉) ဖေဖေါ်ဝါရီ ၄ ဘန်ကောက်မြို ၊ ရွာအုပ်စု အတွင်း န. Volume 1. Surapong Kongchantuk နှင့် အတူ ကရင်အမျိုးသမီး အစည်းအရုံးက သတင်းစာ ထန်းပင်ရင်းတွင် ထန်းတက်လှေကား ထောင်ထားရုံမျှနှင့်ပင် ထန်းတက် ရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လိုင်စင် မဆောင်မနေရ ဆောင်ခိုင်း နေသောကြောင့် ထန်းသမားများမှာ လည်း ဒုက္ခရောက် နေကြပါသည်။ ထိုင်းလူ့အခွင့် အရေး အဖွဲ့မှ ရှေ့နေနှင့် ကရင်အမျိုးသမီး အစည်းအရုံးတို့က ထိုမျှမကသေးပဲ ဒေသဆေးရုံအတွက် ဆေးပဒေသာပင် အလှူဟု ကရင်ပြည်နယ် အတွင်း မြန်မာ စစ်အစိုးရ၏ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုများ၊ အမည်တပ်ကာ တအိမ်ထောင်လျှင် ငွေကျပ် (၇၀၀၀) တောင်းခံလျှက် သတ်ဖြတ်မှုများအပြင် မြေမြုတ်မိုင်းနင်းမိသဖြင့် ခြေပြတ်၊ လက်ပြတ်၊ ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ကြည်ရွာ ၊ ဆပ်ပြာကျင်း ဆက်သွယ်ရေး လမ်းဖောက် ဒဏ်ရာရဓါတ်ပုံများ နှင့် ဗွီဒီယို ဆလိုက်ရှိုးများ ပြသလျှက် သတင်းစာ ရှင်းလင်း လုပ်ရန်အတွက် ဆိုင်ကယ်တစီးလျှင် (၅၀၀၀)ကျပ်၊ စပါး ပဲ ချွေလှေ့စက် ပွဲကို ကျင်းပသွားခဲ့သည်။ ပိုင်ရှင်တဦးလျှင် ကျပ်(၁)သောင်းကျပ် ဆန်စက်ပိုင်ရှင် တဦးလျှင် (၅)သောင်းကျပ် စသည်ဖြင့် ဆက်ကြေးကောက် တောင်းခံလျှက်ရှိ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပို့ ဆောင်ရန် ထိုင်းအမှတ် ၃ တပ် ရာ ဒေသ လုပ်ငန်းရှင်များ အကြပ်အတည်း တွေ့နေကြပါသည်။ ပြည်သူ ရင်းမှူးကြီးက ချမှတ်ထားသောအမိန့် အား ရုပ်သိမ်းပေးရန ထိုင်းအခြေစိုက် လူထု များကိုလည်း ထိုလမ်းဖေါက်လုပ်ရေး အတွက် လမ်းလုပ်အားပေး အင်ဂျီအိုအဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၇၀ ကျော်တို့ကကန့်ကွက်စာကို ထိုင်းဝန်ကြီး ဟုဆိုကာ အတင်းအဓ္ဓမ လုပ်အားပေးရန် ခိုင်းစေ နေလျှက် ချုပ်ထံသို့ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၅ရက်နေ့တွင် ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းရှေ့နေ ရှိကြောင်း ဒေသခံများက ရင်ဖွင့်ပြောကြားလာပါသည်။ များကောင်စီကပြောဆိုသွားသည်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စ နိုင်ငံတကာ သံတမန်တွေ စိုးရိမ် 03 February 2010 မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အစိုးရက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ့်ရက် မကြေညာသေးသလို ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေကို မထုတ်ပြန်သေးတဲ့အပြင် နိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ အကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်မပေးသေးတဲ့အတွက် ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်လာ နိုင်ပါ့မလား လို့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းက စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မြန်မာ့အရေးကို စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ နိုင်ငံတွေက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အခြေအနေတွေနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတခုကို နယူးယောက်မြို့ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရဲ့ မစ်ရှင်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အိုငယ်ာလန်နိုင်ငံနဲ့ ချက်သမ္မတနိုင်ငံတို့က ကမကထလုပ် စီစဉ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲကို ဥရောပသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေ အပါအ၀င် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ကနေဒါ၊ နော်ဝေး၊ ဆွီဒင်၊ ဒိန်းမတ်လို မြန်မာ့မိတ်ဆွေ နိုင်ငံတွေနဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံက သံတမန်တချို့လည်း တက်ရောက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးအရ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အပါအ၀င် အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေ အားလုံးနဲ့ စေ့စပ်ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ဖို့၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အားလုံးကို လွှတ်ပေးဖို့၊ ရွေးကောက်ပွဲကို လွတလ်ပ် တရားမျှတပြီး အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ အမေရိကန် အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာက တောင်းဆိုနေတာကို မြန်မာစစ်အစိုးရက အခုချိန်ထိ အပြုသဘောဆောင် တုံ့ပြန်ခြင်း မရှိသေးတဲ့ အပေါ်မှာလည်း နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀န်းက စိုးရိမ်မှုတွေ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ .အ.ဖစစ်အစိုးရ၏ ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများက ကျေးရွာ လူထုအပေါ် မတရားအခွန်ကောက်ခံခြင်း အလှူငွေ အဓမ္မ ထိုင်းစေတနာ့ ၀န်ထမ်းများ အ တောင်းခံခြင်း အနိုင်ကျင့် လုပ်အားပေး ခိုင်းစေခြင်း များကြောင့် ဒေသခံ စည်း အဝေးခန်းမ သတင်းစာ များမှာ များစွာ ထိခိုက် နစ်နာနေရကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ကရင်အမျိုးသမီး ထိုဒေသရှိ ဆပ်ပြာကျင်း ၊ ဘုတ်ရွာ ၊ အုန်းတင် ၊ အိုးတိမ်တွင်း ၊ ချောင်းဦး အစည်းအရုံးက ကရင်စစ်ပြေး ၊ အင်ပင်ကြီး နှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင် ကျေးရွာတွေက တောင်သူ ဒုက္ခသည်များအား ပြန်မပို့ရန် လယ်သမားများ အပေါ်အစိုးရက အာနိသင်မရှိသော ဓာတ်မြေသြဇာ ယနေ့ နေ့လည်ပိုင်းက မေတ္တာ များကို တအိတ်ကို (၈၀၀၀)ကျပ် ၊ ၀ါစေ့ (မျိုးစေ့) တထုပ်ကို (၈၀၀၀) ရပ်ခံ တောင်းဆိုလိုက်သည်။ ကျပ်ဖြင့် မ၀ယ်မနေရ အဓ္ဓမရောင်းချနေပြီး ကုန်ကြမ်းသီးနှံ ဝါကို လယ်ထဲ ထိုင်းလူ့ အခွင့်အရေး နှင့် ရွေ့ပြောင်း အလုပ်သမားရေးရာ ကော်မတီဝင် ၊ အတင်းအကြပ် ဖိအားပေး၍ စိုက်ခိုင်း လျက်ရှိပါသည်။ ထိုင်းရှေ့နေများကောင်စီ သဘာပတိ အဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Mr.
03 February 2010 16:23 ဗထူး။ ရိုးမ(၃) Friday. 05 February 2010 17:04 သန်းထိုက်ဦး ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည်ဟု နိုင်ငံတကာနှင့် တိုင်းပြည်အား ကြေညာ ထိုင်းနိုင်ငံ တာ့ခ်ခရိုင် ထဆောင်ယန်း မြို့နယ်ရှိ ဒုက္ခသည် ၁၂ ဦးခန့်ကို ထားသော်လည်း လက်တွေ့တွင် တပ်တွင်းက စိတ်မဝင်စားကြောင်း မြန်မာပြည်သို့ ထိုင်းအာဏာပိုင်များ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ယနေ့ ပို့ဆောင် သိရသည်။ လိုက်သည်။ တပ်ပြင်ပတွင်လည်း အဆိုပါရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စား “ကားပေါ်မှာ တင်သွားတာ ၁၂ ယောက်၊ နို့ဖိုးရွာထဲက ကားနဲ့ ထိုင်းက မှု မရှိဘဲ နှစ်လုံး သုံးလုံး စသဖြင့်သာ နေ့စဉ် ဖြစ်ပျက်သည်သာ စီစဉ်ပေးတယ်၊ ဒီ စစ်သားမဟုတ်တဲ့ စစ်ထောက်လှမ်းရေး ၃ ယောက် မြင်ရကြောင်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးများပင် စိတ်ဝင်စားမှုမှာချဲကိစ္စနှင့် ဧည့်စာ လိုက်သွားတယ်”ဟု ဒုက္ခသည် စခန်းမှ မျက်မြင် သက်သေတဦးက ရင်း ကိစ္စများသာဖြစ်သည်။ ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ ယခုနှစ်တွင် တပ်တွင်းပြောင်းလဲမှုမှာ ကြီးမားမည်ဟု ယုံကြည်ထားပြီး ယနေ့ပြန်ပို့ရန် စီစဉ်ထားသည့် ဒုက္ခသည် ၃၀၀၀ ခန့်မှ အိမ်ထောင်စု ဖြစ်လာနိုင်သည်များကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းရ ခက်ခဲကြောင်း ယခုပင်လျှင် တချို့ကို နောက်ထပ် ပို့ရန် အစီအစဉ် ရှိသော်လည်း ကုလသမဂ္ဂ တပ်တွင်းတွင် ဆင်းရဲမှုပြဿနာနှင့် အုပ်ချုပ်မှုပြဿနာအချို့ ဒုက္ခသည်များ ဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) တာဝန် ရှိသူတချို့ ရှိနေသည်ဟု တပ်တွင်း အသိုင်းအဝိုင်းများက ပြောသည်။ ရောက်ရှိလာ သဖြင့် ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရသည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ လစာငွေတိုးမြှင့်ပေးခြင်းသည် ဝန်ထမ်းများအား နှစ်သိမ့်ခြင်းဖြစ်ပြီး “နိုင်ငံခြားသား UN တွေရှေ့မှာ အခု မပို့ရဲဘူး ပေါ့နော်၊ မနက်က သူတို့ အရင်းခံဖြစ်သည့် တပ်မိသားစုပြဿနာအား ချမှတ်ထားသည့် အမြန်ပို့တာ နိုင်ငံခြားသားတွေ မလာခင် ကပျာကယာ ပို့လိုက်တာ ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်း မကိုင်ပါက တပ်တွင်းမကျေနပ်မှု၊ အုပ်ချုပ် ဖြစ်တယ်”ဟု ၎င်း မျက်မြင်က ပြောသည်။ မှုပြဿနာ တိုးပွားလာမည်ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။ . Page 18 Burma VJ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် အော်စကာဆု လျာထားခံရ 03 February 2010 မြန်မာနိုင်ငံက ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ အရေးအခင်းရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ ဘားမား ဗွီဂျေ (Burma VJ) ဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ် အမေရိကန် အော်စကာဆုတွေထဲက မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် အမျိုးအစားအတွက် စာရင်းတင်သွင်းခြင်း ခံရပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်မှတ်တမ်းကား ဖြစ်လာအောင် စက်တင်ဘာလ အရေးအခင်းအတွင်းမှာ ဘယ်လို လှုပ်ရှားခဲ့သလို ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးကြည့်တော့ ဒီဗွီဘီ သတင်းသမား တယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုအောင်ထွန်းက ဖုံးကိုင်ထားတဲ့ သူတို့နောက်ကို ရန်ကုန်မှာ ရှိသမျှ ရဲနဲ့ စစ်ဘက်ထောက်လှမ်းရေးတွေ အားလုံးက အသည်းအသန် လိုက်ခဲ့ကြတယ်၊ အဲဒီအတွက် သူတို့ဟာ တတ်နိုင်သမျှ နည်းမျိုးစုံသုံးပြီး ပြေးရင်းလွှားရင်းက ကိုယ့်ကို မမှတ်မိအောင် တတ်နိုင်သမျှ ရုပ်ဖျက်ပြီး ကိုယ်ရိုက်ကူးထားတဲ့ သတင်းတွေနဲ့ သတင်းမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံတွေကို နောက်တဆင့် လက်ခံမယ့်သူဆီကို အချိန်မီရောက်အောင် ပေးပို့ခဲ့ကြရတဲ့အကြောင်း ပြောပါတယ်။ ဒီဆု ရနိုင်ခြင်း ရှိမရှိနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့ ကင်မရာမင်းဖြစ်တဲ့ ကိုအောင်ထွန်းက သူ့ရဲ့ ခံယူချက်နဲ့ သဘောထားကို အခုလို ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။ “ဒါ ကျနော်တို့ မမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စတခုပါပဲ။ ဒီ အော်စကာဆုနဲ့ တခြားမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဆုတွေ ရတာထက်စာရင် ကျနော်တို့က ဒီရုပ်ရှင်ကား မြန်မာပြည်နဲ့ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ စစ်အစိုးရရဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေ၊ အဲဒီမှာ သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ နိုင်ငံခြား သတင်းထောက် မစ္စတာ ခန်းဂျိ နာဂါအိ (Kenji Nagai) အပါအ၀င် အခုလတ်တလောမှာ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ဒီဗီဘွီ သတင်းထောက်တွေ၊ တခြား သတင်းဌာနတွေရဲ့ သတင်းထောက်တွေ အကြောင်းကို ဒီရုပ်ရှင်က ဆက်ပြီးတော့ နှစ်ကာလ ကြာရှည်စွာ ပြောနေဦးမယ်လို့ ကျနော် မျှော်လင့်နေပါတယ်။ ဒီဟာက အော်စကာဆု ရတာထက်စာရင် ကျနော်တို့အတွက် ပိုပြီး တန်ဖိုးရှိတယ်လို့လည်း ထင်ပါတယ်။” ၂၀၀၉ ခုနှစ် အမေရိကန် သတင်းမှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်အတွက် အော်စကာဆု အမည်စာရင်း တင်သငွ်းခံရတဲ့ Burma VJ ဇာတ်ကားကို စုစည်းတည်းဖြတ်ပေးခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာကတော့ အန်ဒါးစ် အော်စတာဂါ့ဒ် (Anders Ostergaard) ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တပ်အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲကို စိတ်မဝင်စား ကရင်ဒုက္ခသည်များ စတင် ပြန်ပို့ Wednesday.
.. ပေါ့ဗျာ ......လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်အတွင်း တယ်ရီရှုပ်ခဲ့သမျှတွေကို သတင်းသမားတွေက နာမည်တွေနဲ့ တကွ အတိအကျ ဖောက်သည်ချပြသခဲ့သလို ဒီလိုလူ တစ်ယောက်ဟာ နိုင်ငံဘောလုံး အသင်းရဲ့ ကပ္ပတိန်ကော ဖြစ်ထိုက်သေးရဲ့လား .. လွန်ရင်ဘေး .. ဆိုတဲ့ အင်္ဂလန်နဲ့ ချဲလ်ဆီးအသင်း ကပ္ပတိန်ကြီးပေါ့ .. Issue 1 Page 19 2010-02-02 ဘရာဇီးသား တိုက်စစ်မှူး ဖြစ်သူ ရော်ဘင်ဟိုက မိမိအနေဖြင့် ဘရာဇီးကလပ် ဆန်းတို့စ်အသင်းနှင့် ကာလရှည်လက်တွဲရန် မျှော်လင့်ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုက်သည်။ အဆိုပါ ကစားသမားမှာ ပြီးခဲ့သည့် ရက်အနည်းငယ်တွင် မန်စီးတီးမှ ဆန်းတို့စ်သို့ ၆ လအငှားပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူဖြစ်သည်။ BBC မီဒီယာ၏ ဖော်ပြချက်များအရ ရော်ဘင်ဟိုမှာ ဘရာဇီးဂန္တ၀င် ကစားသမားကြီး ပီလီနှင့်အတူ ဆန်းတို့စ်အသင်း၏ အိမ်ကွင်း ဗီလာဘယ်မီရိုသို့ ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် သွားရောက်ကာ ပရိသတ်များနှင့် တွေ့ဆုံပွဲ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ပီလီမှာ တစ်ခါက ဆန်းတို့စ်အသင်းအတွက် ၄၇၄ ဂိုးသွင်းယူခ့သဲည့် ကစားသမား ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ရော်ဘင်ဟိုမှာ ဆန်းတို့စ်အသင်းတွင် တစ်ခါက ၀တ်ဆင်ခ့ဖဲူးသည့် နံပါတ် (၇) ဂျာစီကို ပြန်လည် ၀တ်ဆင်ကာ ကစားမည်ဖြစ်သည်။ အင်တာဗျုးတစ်ခုတွင် ရော်ဘင်ဟိုက "၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ဘရာဇီးအသင်းနဲ့ ပါဝင်ချင်လို့ အခုလို ဆန်းတို့စ်အသင်းကို ပြန်လာခဲ့တာပါ။ ဆန်းတို့စ်ဟာ အရင်ကတည်းက ကိုယ်ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ အသင်းဖြစ်လို့ နောင် လာမယ့် အနာဂတ်တွေအထိ ဆက်နေချင်ပါတယ်" ဟု ပြောဆိုခ့သဲည်။ရော်ဘင်ဟိုမှာ ဆန်းတို့စ်အသင်းတွင် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၅ ခုနှစ်ကြား ကာလများတွင် ကစားခဲ့သူဖြစ်ပြီး အသင်းအတွက် ပွဲပေါင်း ၁၉၀ ကစား ၈၃ ဂိုး သွင်းယူခ့သဲူဖြစ်သည်။ 2010-01-28 မန်ယူ အသင်းမှာ ယမန်နေ့က ကားလင်း ဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ် ဒုတိယအကျော့ အိမ်ကွင်း ပွဲစဉ်အဖြစ် မန်စီးတီး အသင်းနှင့် ကစားခဲ့ရာ ၃း၁ ဖြင့် အနိုင်ရပြီး နှစ်ကျော့ပေါင်း ရလဒ် ၄း၃ အရ ဖိုင်နယ် အဆင့်သို့ တက်ရောက်သွားပြီ ဖြစ်သည်။ မန်စီးတီး အသင်းမှာ ကားလင်းဖလား လက်ရှိ ချန်ပီယံ မန်ယူကို ပြီးခဲ့သည့် ပထမ အကျော့ အိမ်ကွင်းတွင် ၂း၁ ဖြင့် အနိုင် ရခဲ့သော်လည်း ယခု အဝေးကွင်းပွဲတွင် ရှုံးနိမ့်ခ့ေဲသာကြောင့် သမိုင်း တစ်လျှောက် ၂၉ နှစ်ကြာ သက်တမ်း အတွင်း ပထမဆုံး အကြိမ် ကားလင်း ဖလား ဖိုင်နယ် တက်မည့် အခွင့်အရေးကို လက်လွှတ် ခဲ့ရပြီ ဖြစ်သည်။ ယမန်နေ့ပွဲမှ မန်ယူအတွက် ဂိုးများကို ဒုတိယပိုင်း ၅၂ မိနစ်တွင် ပေါလ်စခိုးလ်၊ ၇၁ မိနစ်တငွ် ကားရစ် နှင့် မိနစ် ၉၀ တွင် ရွန်းနေတို့က သွင်းယူ သွားခဲ့သည်။ မန်စီးတီးမှာ ဒုတိယပိုင်း ၇၆ မိနစ်တွင် သွင်းယူခ့သဲည့် တီဗက်ဇ်၏ ချေပဂိုးဖြင့်သာ ကျေနပ်ခ့ရဲသည်။ ယင်းကြောင့် အာဂျင်တီးနားသား တီဗက်ဇ်မှာ အသင်းဟောင်း မန်ယူနှင့် ကားလင်း ဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ် နှစ်ကျော့စလုံးတွင် မန်စီးတီး အသင်းအတွက် ၃ ဂိုး သွင်းယူနိုင်ခဲ့သည့် တိုက်စစ်မှူး တစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယမန်နေ့ ပွဲစဉ်တွင် မန်စီးတီးဘက်မှ တိုက်စစ်မှူး ဘယ်လာမီမှာ ထောင့်ကန်ဘော ကန်ရန် ပြင်ဆင်နေစဉ်အတွင်း ပွဲကြည့်စင်မှ မန်ယူပရိသတ်တစ်ဦးက အကြွေစေ့ဖြင့် ပစ်ပေါက် ခဲ့သဖြင့် အဆိုပါကစားသမား၏ ခေါင်းကို ထိမှန်ခဲ့ရပြီး အခြားပရိသတ်တစ်ဦးမှလည်း ဘီယာပုလင်းနှင့် ပစ်ပေါက်ခ့ေဲသာကြောင့် ထပ်မံရှောင်ရှားခဲ့ရသည်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကြောင့် ပွဲကို တာဝန်ယူကိုင်တွယ်နေသည့် ကွင်းလယ်ဒိုင်ဖြစ်သူ ဟောင်းဝပ်ဝက်ဘ်မှာ ပွဲကို ခေတ္တမျှ ရပ်နားခဲ့ရသည်။ မန်ယူအသင်းမှာ ယင်း ကိစ္စအတွက် FA အဖွဲ့၏ အရေးယူမှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိသည်။ မန်ယူမှ နောက်ခံ ဘယ်အစွန်လူ အီဗရာမှာလည်း ယမန်နေ့ပွဲတွင် မီးခြစ်ဖြင့် ပစ်ပေါက်ခံရကြောင်း သိရသည်။ သတင်း အနံ့လေးရတာနဲ့ လက်မြန် ခြေမြန် ရှိလှတဲ့ သူတို့ဆီက သတင်းထောက်တွေကြောင့်လည်း တိုက်ဂါးဝုဒ်နဲ့ ပျော်ခြဲ့ ကဘူးပါတယ်ဆိုတဲ့ မိန်းမချော ...... လေးရှက် ထပ်ဆင့်ရင်း အတတ်ကျူးတဲ့ ဒဏ်ကို ခံနေရပါပြီ .... အကစားလွန်သွားတဲ့ နှလုံးသား ကစားပွဲမှာ အထိနာခဲ့ရပါပြီ . သူဟာ ၂၀၀၆ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ဘရစ်ခ်ျကို အားပေးဖို့ တခြား ဘောလုံးသမား ဇနီးမယားတွေနဲ့ အတူ ဂျာမနီမြေကို လိုက်လာဘူးသူဖြစ်ပြီး အဲဒီအချိန်ကစလို့ တယ်ရီရဲ့ ဇနီး တိုနီနဲ့ အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်ခြဲ့ ကပါတယ်။အိမ်ချင်းကလည်း မဝေးလှလို့ နှစ်အိမ့် တစ်အိမ် ၀င်ထွက်တတ်ကြသူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် မန်စီးတီးမှာ သွားကစားနေပြီဖြစ်တဲ့ ၀ိန်းဘရစ်နဲ့ ဗာနက်ဆာတို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ထဲမှာ ကတောက်ကဆ ဖြစ်ခြဲ့ ကသလို ၀ိန်းဘရစ်ဟာ မန်စီးတီး အသင်းနဲ့ အဆင်ပြေပြေ ကစားလို့ဖြစ်မယ့် နေရာဘက်ကို ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြဲ့ ပီး ဗာနက်ဆာကတော့ ပေါင် ၃ သန်းတန် အိမ်ဟောင်းမှာ ၃ နှစ်အရွယ် သားကလေးနဲ့ ကျန်နေခဲ့သူပါ။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာပဲ တယ်ရီနဲ့ ဗာနက်ဆာတို့ ဇာတ်လမ်းစခဲ့ပြီး ဗာနက်ဆာဟာ ကိုယ်ဝန်ရခဲ့တဲ့ အထိ ဖြစ်ခ့ပဲါတယ်။ ဒီအခါ တယ်ရီဟာ ပုဂ္ဂလိက ဆေးခန်း တစ်ခုမှာ ဗာနက်ဆာရဲ့ ကိုယ်ဝန်ကို ဖျက်ချစေခဲ့တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။တယ်ရီအနေနဲ့ ကိုယ့်ဇနီးသည်ရဲ့ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းမို့ ကူညီဖို့ပါ ဆိုပေမယ့် အဲဒီ ကိုယ်ဝန်ရှိတဲ့ သတင်းကို သူငယ်ချင်း အရင်းခေါက်ခေါက် တိုနီမသိရှာခဲ့ပါဘူး။အခုတော့ ဇာတ်လမ်းတွေဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ရှုပ်ထွေးလာပြီး ကိုယ်ချစ်သူကိုမှ ကျူးကျူးကျော်ကျော် လာစော်ကားတဲ့ တယ်ရီကြောင့် ၀ိန်းဘရစ်ခ်ျ ခမျာလည်း အတော်ပဲ ခံစားနေရပါတယ်။မန်စီးတီး အသင်းဖော်တွေဖြစ်ခ့တဲ့ တိဗက်ဇ် အိုင်ယာလန်စတဲ့ သူတွေဟာ ဘရစ်ခ်ျကို အားပေးစကားတွေနဲ့ ကိုယ်ချင်းစာနာတတ်မှုကို ပြခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ပတ်ကို ပေါင် ၁၇၀၀၀၀ ရနေတဲ့ ချဲလ်ဆီးကပ္ပတိန်ကြီးကတော့ တစ်ရှက်ပေါ် သုံး ..... တယ်ရီရဲ့ အဖြစ်ဟာ တိုက်ဂါးဝုဒ်ထက်တောင် ပိုဆိုးပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ရင်သွေးငယ် အမြွာပူးလေး ၂ ယောက်နဲ့ အတူ ငယ်ချစ်ဦးလည်းဖြစ်တဲ့ ဇနီးသည် တိုနီ ရှိနေတဲ့ ကြားက တခြား မိန်းမသား တစ်ယောက်နဲ့ မှောက်မှားခဲ့ တာကြောင့် ဖြစ်ပြီး အဲဒီ မိန်းမသားဟာလည်း ကိုယ့်အသင်းဖော်ရဲ့ ဇနီးသည် ဖြစ်နေတဲ့ အပြင် ကိုယ့်မိန်းမရဲ့ အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းလည်း ဖြစ်နေတာကြောင့်ပါပဲ ... ပြန်လည် မချေပနိုင်ခ့ေဲတာ့ပါဘူး ....... အချစ်ဆိုတာ တန်ရင်ဆေး ... အခု တိုက်ဂါးဝုဒ်ထက် သာတဲ့ သူတစ်ယောက် ထပ်ပေါ်လာပြန်ပါပြီ။သူကတော့ . တစ်ယောက်နဲ့ မီဒီယာ စာမျက်နှာတွေပေါ် ရောက်လာချိန်မှာတော့ အကောင်းဆုံး ရိုက်ချက်တွေနဲ့ဲ့ ကိုရွှေ တိုက်ဂါး ခဗျာ ခေါင်းတောင် မဖော်နိုင်ခဲ့တော့ပါဘူး။စကင်ဒီနေဗီးယန်းသူ ဖြူဖြူချောချော ဇနီးသည်က မုန့်သာဝေစားမယ် အချစ်ကို ချန်ပီယံ သရဖူယူခ့တ ဝေမစားနိုင်သူမို့ ကွာရှင်းမယ် တကဲကဲပေ့ါ။ဒေါ်လာသန်း ရာနဲ့ချီချမ်းသာတဲ့ တိုက်ဂါးဝုဒ်ဟာ ဟေတီငလျင်အတွက် ဒေါ်လာ ၃ သန်း လှူဒါန်းခဲ့သေးပေမယ့် အဲဒီသတင်းဟာ ကွာရှင်းကြတော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းလောက် လူတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို မရခဲ့ပါဘူး။လောလောဆယ် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ဆေးခန်းတစ်ခုမှာ အနားယူနေရတဲ့ တိုက်ဂါးဝုဒ်အတွက် စိတ်ပျက်သွား ခဲ့ကြတဲ့ စပွန်ဆာတွေကြောင့် တိုက်ဂါးဝုဒ်ဟာ မခန့်မှန်း နိုင်လောက်တဲ့ ၀င်ငွေတွေလည်း လျော့ပါးသွားဦးမှာပါ။ ဟော .. Volume 1.. မိန်းမလှလေးတွေဟာ ဟော .. တယ်ရီ ..သြော် . .သူ့ရဲ့ အခုကိစ္စကို ဘယ်လိုလူကမှလည်း ခွင့်လွှတ်မယ့် စကား ပြောမလာသေးပါဘူး .............စိတ်အလိုကိုလိုက် မိုက်မှားတတ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလိုပဲ အကဲလွန် .....ဗာနက်ဆာ လို့ခေါ်တဲ့ ပြင်သစ်သူလေးဟာ အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင် ၀ိန်းဘရစ်ခ်ျရဲ့ ချစ်သူပါ . လို့ပါ မေးလာကြတဲ့အခါ ........ အသင်းနည်းပြ ကာပယ်လိုက အမှန်ကိုသာ ဖြေပါလို့ တောင်းဆိုခ့သဲလို အားကစားဝန်ကြီး ဂယ်ရီ ဆက်ကလစ်ဖ်ကလည်း စဉ်းစားချင့်ချိန်သင့်ပြီလို့ ဆိုခ့ပဲါတယ်။လောလောဆယ် နောက်ဆုံး သတင်းတွေအရ တိုနီဟာ တယ်ရီနဲ့ လမ်းခွဲဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။မန်စီးတီး အသင်းနဲ့ အတူ အင်္ဂလန် အသင်းသား တချို့ရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို ခေါင်းငုံခံနေရရှာတဲ့ တယ်ရီဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေ ဘန်လေနဲ့ပွဲမှာ အနိုင်ဂိုး သွင်းပေးနိုင်ခ့ေဲပမယ့် ကိုယ့်ဘ၀ကို အခြေပျက်စေမယ့် ကိုယ့်ဂိုး ကိုယ်ပြန်သွင်းမိတဲ့အပေါ်မှာတော့ ........ တစ်ယောက် ဟော..
.... မစ်ဒယ်ဘရော့ မှ မန်စီးတီး သို့ မန်စီးတီး အသင်းမှာ အင်္ဂလန် ပထမတန်း ချန်ပီယံရှစ်ကလပ် မစ်ဒယ်ဘရော့ အသင်းမှ ကွင်းလယ်လူ အဒမ်ဂျွန်ဆင်ကို အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြေး ဖြင့် ခေါ်ယူလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ကွင်းလယ်လူမှာ မန်စီးတီး အသင်းနှင့် လာမည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ စာချုပ် ချုပ်ဆိုလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ မန်စီးတီး အသင်းမှ နည်းပြ ဖြစ်သူ မန်ချီနီက " အဒမ်ဂျွန်ဆင်ဟာ ကျွန်တော့် အသင်းမှာ အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်း ပြနိုင် မယ်လို့ ယုံကြည် ပါတယ်။ သူဟာ မစ်ဒယ်ဘရော့ အသင်းရဲ့ ပင်တိုင် ကွင်းလယ်လူ တစ်ဦး ပါ။ ဒါကြောင့် အခုလို ခေါ်ယူ လိုက်ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် " ဟု ပြောဆိုခ့သဲည်။ အဒမ်ဂျွန် ဆင်မှာ မန်စီးတီး အသင်းတွင် နံပါတ် ၁၁ ဂျာစီကို ၀တ်ဆင်မည် ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ဘရာဇီးအသင်းနဲ့ ဖြစ်ပြီး လာမည့် စနေနေ့ ဟောလ်စီးတီး နှင့် အဝေးကွင်း ပရီးမီးယား ပွဲတွင် အသင်းအတွက် ပထမဆုံး ပွဲထွက် ပါဝင်မည် ဖြစ်သည်။ မန်စီးတီး အသင်းမှာ ရီးရဲလ်မှ ကွင်းလယ်လူ ဂါဂို ကို ပါဝင်နိုင်ဖို့ ပြည်တွင်းအသင်းသို့ပြန်လာ ခေါ်ယူရန် အတွက် အပြင်းအထန် ကြိုးပမ်းနေကြောင်း သိရသည်။ မန်ယူ အသင်းအိမ်ကွင်း ၃+၁ အနိုင်ပွဲ ကားလင်း ဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ် နွှဲ အဝေးကွင်း ရလာဒ် (၂+၁) 2010-02-01 ပြီးခဲ့တဲ့ လထဲမှာ ကိုယ့်ဇနီး မယားနဲ့ သမီးသားတွေ ရှိပါ လျက်နဲ့ ဆန္ဒ အလိုကိုလိုက် မိုက်မိခ့လဲို့ လူသိရှင်ကြား သောက ပွားခဲ့ရတဲ့ ကစားသမား ၂ ယောက် အကြောင်းဟာ မီဒီယာ စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ ပလူပျံခ့ပဲါတယ်။ အဲဒီ ကစားသမား ၂ ယောက်ဟာ မတူညီတဲ့ နယ်ပယ်မှာ အောင်မြင်မှု သရဖူ ကိုယ်စီ ရထားကြသလို ကမ္ဘာကျော် ကစားသမား တွေလည်း ဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့ ၂ ယောက်ကတော့ ဂေါက်သီး ချန်ပီယံ တိုက်ဂါးဝုဒ်နဲ့ အင်္ဂလန် ဘောလုံးအသင်း ကပ္ပတိန် ဂျွန်တယ်ရီ တုိ့ပါပဲ။တိုက်ဂါးဝုဒ်ဟာ ဂေါက်သီး လောကမှာ သရဖူပေါင်း များစွာနဲ့အတူ သန်းကြွယ် သူဋ္ဌေးဘ၀ကို ခံယူထားသလို မော်ဒယ် ဖြစ်ခ့တဲ့ ဇနီးသည် အီလင်နဲ့အတူ သာယာ ချမ်းမြေ့တဲ့ အိမ်ထောင်သည် ဘ၀ကို ထူထောင် ထားသူပါ။ဒါပေမယ့် တိုက်ဂါးဝုဒ် အတွက် ရွှေရောင်လွှမ်းခဲ့တဲ့ ပျော်ရွှင် အချစ်+ဘောလုံးနှင့်အချစ်+ဂေါက်သီး ရောထွေးမိသူများ ဘွယ်ရာ နေ့ရက်တွေဟာ ၂၀၀၉နဲ့အတူ ကုန်ဆုံး သွားခဲ့ရ ပါပြီ။ ဆမ်နဲ့ ချာလီလို့ခေါ်တဲ့ သမီးနှစ်ယောက် ရှိထားကြပြီဖြစ်ပြီး အများက အားကျရလောက်တဲ့ စုံတွဲဖြစ်ခ့ေဲပမယ့် အဲဒီဘ၀ တွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ရှိခ့တဲ့ တိုက်ဂါးဝုဒ်ရဲ့ မလည်ရှုပ် ဇာတ်လမ်းဟာ အခုတော့ ဘူးပေါ်သလို ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်။ မိန်းမ ချောလေးပေါင်း များစွာကို ငွေကုန်ကြေးကျခံ ခေါ်ယူပြီး ပျော်ပါးခဲ့တဲ့ ကာလတွေရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ ပဲပေါ့ .. အိမ်က အိမ်ဖော်ဟောင်းပါ မကျန် တိုက်ဂါးဝုဒ်ရဲ့ နှလုံးသား ရိုက်ချက်တွေ ခံခ့ရဲတာကိုး .... .
Issue 1 tcsyfykd Adding (1) (u) .Volume 1.
tcsyfykd Adding (2) (c) .
Volume 1. Issue 1 tcsyfykd Adding (3) (*) .
Dictators & Burma's Traitors
ABMA Journal Volume 1 No 13